Indeks Bursa Saham Capai Paras Tertinggi, Tetapi Saham Felda Terus Merudum
A Typical Chinese Confinement Meal
Quran As Our Companion On Judgement Day..
Rohingya conference in Istanbul اللغة العربيه
“Justice too long delayed is justice denied for 10 murdered Muslims in Taungope”"
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူများကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ မက္ကာမြို့ နှင့် မဒီနာမြို့ တွေမှာ ဘာကြောင့် ဝင်ခွင့် မပြုရတာလဲ ?
Myanmar Military’s retaining of the power by hook or by crook
After clashes, plight of segregated Muslims isachallenge to Myanmar democracy hopes
Hot News ဂျာနယ် ဆောင်ပါးရှင် နိုင်ထက်ရှိန်(ဟင်္သာတ)သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
သာကီဝင်နှင့် မျိုးဖျောက်ချင်သူများ “အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်တော်မူရင် ပေါက်ဖော်သာယူ”
Posted: 06 Oct 2012 10:37 AM PDT
So, its confirmed that Scorpene wasaclean buy, no scandals and no hidden hands involved.
Defence Minister Dr Ahmad Zahid Hamidi said the Auditor-General has already explained that the purchase of Scorpene submarines was made according to legal procedures and his official report must be accepted by all quarters.
In response to the opposition's plan to bring inaFrench lawyer, William Bourdon, to brief the Malaysian lawmakers on court proceedings in France on the purchase of the submarines, Ahmad Zahid hopes no quarters would twist the existing facts on the matter.
Opposition Leader Anwar Ibrahim went to Paris last week to meet the lawyers acting for both SUARAM and DCNS in the Scorpenes corruption trial, with the intention of inviting them to come to Malaysia and brief Parliament on the latest status of the case.
Pakatan Rakyat, through its media like Malayskini, Malaysian Insider and others had accused PM Najib's Cabinet of using RM7.3 billion public money to purchase both submarines.
Even NGO like SUARAM playsaleading role in 'exposing' what the opposition alleged as 'the biggest scandal' the BN government ever committed, and that Najib, his wife Rosmah and former aide Razak Baginda were the culprits, linking them to the murder or Mongolian Altantuya Shaariibuu,aperson they believed was part of the 'scandal'.
And now that the Auditor-General has confirmed the purchase was legal and according to procedure, I believe the opposition will lambast it asacover-up cahoot.
Let's hear to what Anwar & Gang have to say about this...
For sure they will call the Auditor-General 'a big liar'!
Posted: 06 Oct 2012 10:58 AM PDT
"Kita akan berhimpun untuk nyatakan sikap dan pendirian dan desak kerajaan umumkan pakej penyelamat (Felda)," kata presiden ANAK, Mazlan Aliman pada sidang media di ibu negara.
Posted: 06 Oct 2012 07:29 AM PDT
Annakate turns4weeks old yesterday and she is definitely growing stronger. As for myself, I am counting down for my confinement period to end gloriously.
Many people have asked me what I have been eating lately. My typical answer would be ginger, sesame oil, chicken, herbal soup, black fungus, red dates and brown rice. I think it is very silly of me to mention the ingredients and not the name of the cooked food after being put together. Kindly forgive me for the silly answers.
The truth is, I have been eating well. And I mean it, VERY well. I have an invigilator on my Skype twiceaday, watching over me, asking what I am eating. Who would that be? She is none other than my mom. (Mom, I love you!) She is not being able to fly over to the US to assist me with the confinement, but she has been helpful in guiding me on what to eat and what not to eat.
Oh yes, I have never eaten so much ginger or sesame oil in my life in suchashort period of time. It isaginger madness in the kitchen. Nevertheless, I really don't mind eating ginger daily because I love ginger and it has so many health benefits. Some of the best benefits you can reap from eating ginger will be eliminating intestinal gas and aiding digestion, thus promoting weight loss. I definitely want to lose my remaining 18 pounds. Yup, I am still stuck there with the remaining 18 pounds. I guess it will take some time for me to shrink my hips and fit into those pre-preggo jeans again.
I made Ginger Chicken Wine yesterday as I have to consume the entire bottle of DOM Benedictine Liquor by day 40. It's actually quite easy to make this dish.
Ingredients for this dish to serve4pax:
6 pieces of black fungus (soak it for 45 minutes before cooking, and slice them up)
1 large ginger (sliced)
3 cups of DOM liquor
1. Firstly, heat up the pan with sesame oil at medium heat and fry the black fungus foragood 60 seconds.
2. Add in the diced chicken and stir-fry for about2minutes before adding the ginger at medium high heat.
3. Keep stir-frying for aboutaminute or two.
4. Once the meat is about 90% cooked, add in water and let it simmer at medium heat for about3minutes.
5. Add DOM liquor, rice wine and soy sauce.
6. Let it simmer with the lid closed at low heat for 10 minutes.
7. It will be ready to be served with other dishes.
As I am still observing my confinement, there isalist of restricted vegetables that I can only consume such as Chinese Broccoli (Kai Lan), Choy Sum, and spinach. I usually would just boil the vegetables for about5minutes. Then I will coat the vegetables with sesame oil, soy sauce, white pepper powder, fried garlic, and fried shallots.
As for the herbal soup, getacrockpot oraslowcooker of about3Quart size. Then dunk in 8 pieces of red dates,3pieces of Cordopsis root (Dong Sum), 8 pieces of American ginseng slices (Fa Kei Sum),5pieces of black dates,2pieces of dried longan, 1.5 tablespoon of Wolfberries (Gei Ji),3pieces of Bak Kei, and 3-4 bowls of water. You may also add in 1-2 chicken breasts to sweeten the soup. I usually do this in the morning so that I can drink the soup for lunch and dinner.
The picture above showsatypical confinement meal that I have been eating for the past4weeks. And I will be continuing such diet until Day 40 before I say hello to cold milk, tomatoes, cucumbers, fresh salads, and many more food that I am missing so much right now.
Happy Confinement to Me and to those who are observing them right now!
"Animism" ဆိုတာ ဘာမှန်း မသိ..၊ ဘာသဘောလဲဆိုတာ နားမလည်..၊ ဆိုင်လား မဆိုင်လား မသိ..၊ သူတပါး ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှု ကို စော်ကားချင်တာနဲ့ ရမ်းသုံး..။ ဘာသာပြန် ရမ်းပြန်တော့ တိရိစ္ဆာန်ဝါဒတဲ့..။
အပြစ် တင်ချင်တဲ့ ဘာသာ နဲ့ "Animism" နဲ့ "ပြဒါးတလမ်း၊ သံတလမ်း" လားလားမှ မဆိုင်ဆိုတာလဲ မသိ..။
ကိုယ် ကိုယ်စားပြုတဲ့ ဘာသာ ရဲ့ အခွဲတွေ နဲ့ သဘော၊ လုပ်နည်း၊ လုပ်ဟန်၊ ဓလေ့ ထုံတမ်း တချို့ မှာ "Animism" သဘော ပါတယ် ဆိုတာလည်း ဘာသာ ကိုယ်စားပြုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ လို့ ခံယူထားပေမယ့် နားမလည်..။
"စိတ် နဲ့ ငါ နဲ့ ညစ် တယ်" လို့ပဲ ဆိုရတော့မယ်..။
ဒီလို သောက်တလွဲ တွေချည်းပဲ လိုက်ဖြေရှင်း နေရသလို ဖြစ်နေတယ်..။
ဒါက "Animism" ရဲ့ အကျဉ်းချုပ်..။
"Animism" သဘော မှာ လူ၊ တိရိစ္ဆာန်၊ သတ္တ လောက၊ ကမ္ဘာ့ ပထဝီ မြေကြီး၊ ရေ၊ မြေ၊ တောတောင် သဘာဝ ဖြစ်စဉ် အားလုံးမှာ ရုပ်/နမ် မခွဲဘဲ (spiritual ရော physical နှစ်မျိုးလုံးမှာ) ဝိညဉ် တည်ရှိ နိုင်တယ်..။ ဒီလို ဝိညဉ် က ဝတ္ထု ပစ္စည်း တိုင်း မှာ တည်ရှိပြီး တည်ရှိမှု ဖြစ်စဉ်ကို ချုပ်ထိန်းနိုင်တယ်..၊ လူသား ဘဝ နဲ့ ဖြစ်စဉ် တွေကို လွှမ်းမိုးနိုင်တယ် လို့ ယုံကြည်တာမျိုးဟာ "Animism" သဘော ဖြစ်တယ်..။
ဒီလို သဘော၊ အယူ နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သဘောထား၊ ဖြစ်ရပ် တွေကို ရှင်တို ဘာသာ၊ ဟိန္ဒိူ ဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဂျိန်းဘာသာ တွေမှာလည်း တွေ့နိုင်တယ်..။
တကယ်တော့ "Animism" သဘောက ကမ္ဘာဦး ရှေး လူသားတွေ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု ဘာသာတရား ကို စတင် လိုအပ်၊ ဖန်တီး လာတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်တယ်..။ သဘာဝ တရား နဲ့ နေစဉ် ဘဝ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေကို ရင်ဆိုင် ဖြေရှင်းရာမှာ တခုခုကို ယုံကြည်ဖို့ လိုလာတယ်..။ တခုခုကို အားကိုးရာရှာဖို့လိုလာတယ်..။ ဒါကြောင့် တောင်အကြီးကြီး (သို့) ကျောက်တုံးအကြီးကြီး (သို့) နေမင်း စတဲ့ အရာဝတ္ထု တခုခု မှာ မမြင်နိုင်တဲ့ (တန်ခိုးလည်းရှိတဲ့) တစုံတရာ ရှိတယ်..။ သူက နေ့စဉ် လူသားဘဝ ကို တခုခု လွှမ်းမိုးတယ် လို့ ယုံကြည်လာတယ်..။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ပူဇော်တယ်..။ သူ့ရဲ့ အစောင့်အရှောက်ကို ခံယူတယ်.. စတဲ့ သဘောပဲ ဖြစ်တယ်..။
ဒါဟာ အလွယ်ပြောရရင် ဘာသာတရား၊ ကိုးကွယ် ယုံကြည်မှုတွေ စပေါ်လာတဲ့ အဆင့်လို့ ဆိုနိုင်တယ်..။
ဒီသဘောဟာ ကမ္ဘာ့ ရှေးဟောင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းတိုင်းမှာ ရှိတယ်…။ ဌာနေ အမေရိကန် တွေရဲ့ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု တွေ ဆိုရင် "Animism" လို့ ပြောလို့ ရတယ်..။ ခုအချိန် ထိ "Animism" ကို အများစု ကျင့်သုံးနေကြတဲ့ အထဲက ကိုယ်နဲ့ နီးစပ်တဲ့…၊ မြင်သာတဲ့ နိုင်ငံ ပြရရင် အာဆီယံ နိုင်ငံတနိုင်ငံ ဖြစ်တဲ့ လာအိုး(စ်) ကို ပြရမယ်..။ သူ့ဆီမှာ ဆိုရင် ဗုဒ္ဓဘာသာ ပြီးရင် ဒုတိယ အများဆုံးက "Animism" လို့ ဆိုနိုင်တယ်..။
နိဂုံးချုပ်ရရင်.. အမှောင်တကာ အမှောင်မှာ အဝိဇ္ဇာ အမှောင် က အကြီးဆုံးပါ..။ အဝိဇ္ဇာ "မသိမှု" က လောကမှာ အဆိုးဆုံးပဲ..။ "မသိမှု" ကို "သိမှု" ဖြစ်စေတဲ့ ပညာ မျက်စိ ကန်းရင် ဘာဆို ဘာမှ မမြင်နိုင်တော့ဘူး..။ အကျိုးအကြောင်း မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး..။ အဲ့လို ဖြစ်ရင် လုပ်တဲ့ အလုပ်၊ ကျင့်တဲ့ အကျင့်၊ ယူတဲ့ အယူ ကလည်း မမှန်တော့ဘူး..။
အားလုံး "အဝိဇ္ဇာ အမှောင်" ဖယ်ရှားနိုင်ပြီး "ပညာ အလင်း" ရပါစေ..။
၀၆ ၊ အောက်တိုဘာ ၊ ၂၀၁၂
ဆောင်းပါးတိုကို ဆောင်းပါးရှင်း ငြိမ်းချမ်းအေးရဲ့ FB စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Animism (FROM WIKIPEDIA) (from Latin anima "soul, life") isaset of beliefs based on the existence of non-human "spiritual beings" or similar kinds of embodied principles.
Posted: 06 Oct 2012 04:10 AM PDT
Posted: 06 Oct 2012 05:04 AM PDT
But Myanmar Government's lies about Rakhine Conflict are stupidly sound untruthful and the murders committed by Rakhines and agent provocateurs are clearly seen as Genocide by the FREE WORLD.
George Orwell, was an English novelist and journalist. His work is marked by clarity, intelligence and wit, awareness of social injustice, opposition to totalitarianism, and belief in democratic socialism. (FROM WIKIPEDIA)
In Burma, Orwell had acquiredareputation as an outsider—he spent much of his time alone, reading or pursuing non-pukka activities, such as attending the churches of the Karen ethnic group. A colleague, Roger Beadon, recalled (ina1969 recording for the BBC) that Orwell was fast to learn the language and that before he left Burma, "was able to speak fluently with Burmese priests in 'very high-flown Burmese.'" Orwell wrote later that he felt guilty about his role in the work of empire and he "began to look more closely at his own country and saw that England also had its oppressed…" Orwell made changes to his appearance in Burma that remained for the rest of his life. "While in Burma, he acquiredamoustache similar to those worn by officers of the British regiments stationed there. [He] also acquired some tattoos; on each knuckle he hadasmall untidy blue circle. Many Burmese living in rural areas still sport tattoos like this – they are believed to protect against bullets and snake bites."
In George Orwell's novel Nineteen Eighty-Four, the Ministry of Truth is Oceania's propaganda ministry. It is responsible for any necessary falsification of historical events. The word truth in the title Ministry of Truth should warn, by definition, that the "minister" will self-serve its own "truth"; the title implies the willful fooling of posterity using "historical" archives to show "in fact" what "really" happened. As well as administering truth, the administration deploysanew tongue-in-cheek language amongst administrators called Newspeak, in which, for example, truth is understood to mean statements like2+2=5when the situation warrants.
Newspeak isafictional language in George Orwell's novel Nineteen Eighty-Four. In the novel, it refers to the deliberately impoverished language promoted by the state. Orwell explained the basic principles of the language in an essay included as an appendix to the novel. Newspeak is closely based on English but hasagreatly reduced and simplified vocabulary and grammar. The totalitarian aim of the Party is to prevent any alternative thinking — "thoughtcrime", or "crimethink" in the newest edition of Newspeak – by destroying any vocabulary that expresses such concepts as freedom, free enquiry, individualism, resistance to the authority of the state and so on. One character, Syme, says admiringly of the diminishing scope of the new language: "It'sabeautiful thing, the destruction of words."
The Newspeak term for the English language is Oldspeak. The Party intends to replace Oldspeak completely with Newspeak before 2050 (except among the Proles, who are not trained in Newspeak and whom the Party regards as barely human and unimportant).
Orwell was inspired to invent Newspeak by the constructed language Basic English, which he promoted from 1942 to 1944 before emphatically rejecting it in his essay "Politics and the English Language".[why?]In this paper he deplores the bad English of his day, citing dying metaphors, pretentious diction or rhetoric, and meaningless words, which he claimed to encourage unclear thought and reasoning. Towards the end of the essay, Orwell states:
" I said earlier that the decadence of our language is probably curable. Those who deny this would argue, if they produced an argument at all, that language merely reflects existing social conditions, and that we cannot influence its development by any direct tinkering with words or constructions.
There has also beenagreat deal of discourse on the possibility that Orwell galvanized his ideas of oppression during his experience, and his subsequent writings in the English press, in Spain. Orwell wasamember of the Workers' Party of Marxist Unification (POUM) militia and suffered suppression and escaped arrest by the Comintern faction working within the Republican Government. Following his escape he madeastrong case for defending the Spanish revolution from the Communists there, and the misinformation in the press at home. During this period he formed strong ideas about the reportage of events, and their context in his own ideas of imperialism and democracy.
Totalitarianism (or totalitarian rule) isapolitical system where the state holds total authority over society and seeks to control all aspects of public and private life wherever necessary.
Aside from fascist and Stalinist movements, there have been other movements that are totalitarian. The leader of the historic Spanish reactionary conservative movement called the Spanish Confederation of the Autonomous Right declared his intention to "give Spainatrue unity,anew spirit,atotalitarian polity…" and went on to say "Democracy is not an end butameans to the conquest of the new state. When the time comes, either parliament submits or we will eliminate it."
Posted: 06 Oct 2012 04:32 AM PDT
‎"We know through painful experience that freedom is never voluntarily given by the oppressor; it must be demanded by the oppressed.
Frankly I have never yet engaged inadirect action movement that was "well timed," according to the timetable of those who have not suffered unduly from the disease of segregation.
For years now I have heard the word "Wait!"
It rings in the ear of every Negro withapiercing familiarity. This "wait" has almost always meant "never."
- Martin Luther King, Letter from Birmingham Jail (April 16, 1963)
Shared from FB of Tenaganita WomensForce
Posted: 06 Oct 2012 07:37 AM PDT
"Ia satu tindakan yang salah dan tidak masuk jika membuat perbandingan antara Malaysia dengan Britain," kata Setiausaha Agung Umno, Datuk Seri Tengku Adnan Tengku Mansor, apabila dihubungi oleh The Malaysian Insider.
"Kerana situasi politik dan pilihan raya negara dengan mereka sama sekali tidak sama.
"Bagaimana mahu menyamakan Najib dengan Brown?"
"Di Malaysia, sejak merdeka hingga sekarang hanya BN yang menjadi kerajaan pusat," kata Mugilan.
"Bagaimana nak bandingkan Malaysia dengan Britain yang sudah banyak kali bertukar kuasa selepas pilihan raya."
"PM tidak mengadakan pilihan raya bukan kerana takut tetapi kerajaan komited untuk menunaikan janji terlebih dahulu kepada rakyat untuk keselesaan dan kemudahan masa depan," kata Tengku Adnan lagi.
"Bukan seperti pembangkang yang hanya menabur janji tetapi tidak ditunaikan. Lihat apa yang terjadi di Selangor dan Pulau Pinang."
"Kita lihat di Selangor, tindakan kerajaan negeri yang mahu mengadakan pilihan raya Dewan Undangan Negeri (Dun) berasingan dengan pusat membuktikan mereka yang takut untuk menghadapi PRU dan bukannya BN," kata Mugilan.
"Najib sebagai PM mempunyai kekuatan sendiri.
Like the former British prime minister, Mr Najib purports to beaprogressive reformer, onamission to "modernise" his country. The British-educated Mr Najib also likes to pay as much attention to the spin on his policies as to their substance. He even hires former Blair advisers to make sure he gets it right.
For all that, Mr Najib increasingly resembles the hapless Gordon Brown, Mr Blair's nemesis and successor. For years Mr Brown agitated to push his rival aside. When at last he succeeded, Mr Brown blew it by missing the chance to call an early election while he was still relatively popular. Rather than winning his own mandate, Mr Brown, unelected and indecisive, watched his authority drain away until he was boxed into calling an election right at the end of his term—which he then lost. Similarly, Mr Najib took over after an internal party coup in April 2009 against the then prime minister, Abdullah Badawi. Talk of an early election for Mr Najib to secure his own mandate first surfaced towards the end of 2010. He himself began to talk up his chances the following June. Then an election was expected towards the middle of this year. All along, Malaysia has been on an election footing, with the cautious Mr Najib ponderously cultivating the voters.
Given UMNO's deep pockets and its practice of gerrymandering constituency boundaries, winningasimple majority has always looked relatively easy for Mr Najib. After all, the ruling coalition, made up of UMNO and several smaller parties, has achieved that in every election since independence in 1957. Yet Mr Najib's real aim is to win back the two-thirds majority that the BN lost for the first time at the last election, in 2008. In so doing the BN lost its power, among other things, to tinker with the constitution. That failure led directly to the coup against Mr Badawi and the elevation of Mr Najib. The prime minister knows that if he fails to reverse the humiliation of 2008,agenuinely hard task, then he could go the same way as his predecessor (His chief protection is that personally he remains more popular than the BN.)
Posted: 06 Oct 2012 04:03 AM PDT
Posted: 06 Oct 2012 03:59 AM PDT
Source: Mohammed Naeem
‎"အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူများကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ မက္ကာမြို့ နှင့် မဒီနာမြို့ တွေမှာ ဘာကြောင့် ဝင်ခွင့် မပြုရတာလဲ ???"
ယခုအချိန်မှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို နည်းလမ်းပေါင်းစုံ သုံးပြီး မမှန်ကန်တဲ့ ဝါဒဖြန့်မှုတွေ တစိုက်မတ်မတ် လုပ်ဆောင်လာနေကြတာကို ဝမ်းနည်းဖွယ် တွေ့နေရသလို တစ်ဘက်တစ်လမ်းကနေ အများပြည်သူ အကြား အထင်အမြင်လွဲမှားနေတာတွေကို မှန်ကန်စွာ နားလည်လာစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းနှင့် ပွင့်လင်းစွာမေးမြန်းလာကြသူ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူများလည်း အမြောက်အများရှိလာပါတယ်။
အထက်ပါမေးခွန်းကို ကျွန်တော့်ထံ မေးမြန်းလာတဲ့ ညီငယ်ကို ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း ဦးစွာပထမ ပြောကြားလိုပါတယ်။
ဆက်လက်ပြီး ညီငယ်ရဲ့ မေးခွန်းကိုဖြေကြားပါ့မယ်။
အဲဒီ နိုင်ငံရဲ့ ဥပဒေ အရ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မဟုတ်သူများကို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ မက္ကာမြို့ နှင့် မဒီနာမြို့ တွေမှာ ဝင်ခွင့် မပြုပါဘူး။
အောက်ပါ အချက်အလက်များဟာ ဘာကြောင့် ဝင်ခွင့်မပြုရသလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက် အချို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အစ်ကိုတို့ တိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့ တပ်မြေတွေ၊ တိုင်းစစ်ဋ္ဌာနချုပ်ရှိတဲ့ နယ်မြေတွေ၊ စစ်ရုံးချုပ်ရှိတဲ့ နေရာတွေရဲ့ ပရဝုဏ် ပတ်ပတ်လည်မှာ "တပ်မြေ မကျူးကျော်ရ" တို့ "ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်မပြု ပစ်ခတ် အရေးယူခြင်း ခံရမည်" စတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်တွေ ရှိပါတယ်။
ထိုနည်းတူစွာပဲ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်မှာ "Cantonment" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ရှာကြည့်ပါ။ အဖြေမှာ "တပ်နယ်မြေ။ အိန္ဒိယရှိ အမြဲတမ်း စစ်စခန်း" လို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီက သာမာန် အရပ်သား အိန္ဒိယ နိုင်ငံသားတွေလည်း အဲဒီ Cantonment ထဲ သွားခွင့်မရှိဘူး။
အဲဒီလိုပဲ အခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်း ဒီလို နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်တဲ့ တားမြစ်နယ်မြေတွေ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။
နိုင်ငံသားတစ်ဦးဖြစ်ပါလျက်နှင့် တပ်မြေတို့ စစ်စခန်းတို့ကို ဘာလို့ ဝင်ခွင့်မရသလဲဆိုပြီး စောဒက တက်ခွင့်မရှိဘူး ညီငယ်။
လူတစ်ဦးဟာ စစ်တပ် တားမြစ်နယ်မြေထဲ ဝင်ခွင့်ရဖို့ စစ်မှုထမ်းတစ်ဦး အနေနှင့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တာဝန် ထမ်းဆောင်သူ အဖြစ် စာရင်းဝင်ဖို့လိုပါတယ်။
အဲဒါကြောင့် အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ သာသနာ့ ခံတပ်သဖွယ်ဖြစ်တဲ့
အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အထွတ်အမြတ်ထားရာ မက္ကာမြို့ နှင့် မဒီနာမြို့ တွေမှာ အစ္စလာမ်ဘာသာကို မိမိ အသက်ထက်ပိုပြီး ချစ်မြတ်နိုးစွာ ကာကွယ်စောင့်ရှောက် ကျင့်သုံးပါ့မယ် ဆိုပြီး စာရင်းသွင်းထားတဲ့ မွတ်စလင်မ်များကိုသာ သီးသန့်ဝင်ခွင့်ပြုထားရခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့လို့ မွတ်စလင်မ် မဟုတ်သူတွေက ဘာကြောင့် မွတ်စလင်မ်တွေဟာ ဒီနေရာ ဒီမြို့ နှစ်မြို့ကို ဝင်ခွင့်မပြုတာလဲ၊ ဒီလိုခွဲခြားတားမြစ်တာ Logic မကျဘူးလို့ ဝေဖန်နေတာတွေဟာ ဒီရှင်းပြချက် တစ်ခုနဲ့တင် Logic ကျကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။
ညီငယ်ရေ နိုင်ငံရပ်ခြား တိုင်းပြည်တစ်ခုခုကို သွားချင်ရင် သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးကနေ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ (VISA) ယူရကြောင်း အထူးရှင်းပြစရာ မလိုလောက်ဖူးလို့ ထင်ပါတယ်။
နိုင်ငံတစ်ခုနှင့်တစ်ခု ပြည်ဝင်ခွင့် လျှောက်ထားရာမှာ တစ်နိုင်ငံ နှင့် တစ်နိုင်ငံ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း ဥပဒေ၊ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေ၊ လျှောက်ထားမည့် သူမှာ ရှိရမဲ့ အရည်အချင်းတွေ တစ်မျိုးစီ မတူညီပဲ ကွဲပြားကြပါတယ်။
အထူးသဖြင့် အနောက်နိုင်ငံကြီးတွေ၊ ဖွံ့ဖြိုးပြီး နိုင်ငံတွေကို သွားလိုတဲ့ တတိယကမ္ဘာနိုင်ငံက လူတွေ အတွက် ပိုလို့တောင်တင်းကျပ်တဲ့ Rules and Regulations တွေထားရှိကြောင်း လျှောက်ထားဖူးသူတိုင်း သိကြပါတယ်။
စင်္ကာပူလိုနိုင်ငံကိုသွားချင်ရင် မူးယစ်ဆေးဝါး အနည်းငယ်တောင်ပါသွားလို့မရပါဘူး။ စစ်ဆေးလို့တွေ့ရှိခဲ့ရင် သေဒဏ် အပေးခံရနိုင်ကြောင်း ကြေငြာထားပါတယ်။ ဒါသူတို့ရဲ့ ဥပဒေပါ။ ဒါကို အစ်ကိုတို့က သူတို့ကို သွားပြီး မင်းတို့ဥပဒေက ကြမ်းတယ်၊ ရှေးဟောင်းဆန်တယ်လို့ ပြောလို့မရယုံသာမက အဲဒီနိုင်ငံရဲ့ ကျင့်သုံးနေတဲ့ ဥပဒေကို မလွဲမသွေ လိုက်နာရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် ညီငယ်။
ထိုနည်းတူစွာပဲ မည်သည့်လူသားမဆို အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့ အမြတ်တနိုးထားရာ မြင့်မြတ်တဲ့ နယ်မြေ နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ မက္ကာမြို့ နှင့် မဒီနာမြို့ တွေကို ဝင်လိုတယ် ဆိုရင်တော့ (VISA) တစ်ခု မလွဲမသွေ ရှိရပါမယ်။
အဲဒီ (VISA) က နှလုံးသားကနေ ယုံကြည်ပြီး နူတ်လျှာကနေ ထွက်ဆိုရတဲ့ အစ္စလာမ်ဘာသာရဲ့ မွန်မြတ်သန့်စင်လှတဲ့
"အလ္လာဟ်အရှင်မြတ် မှတပါး အခြား ခဝပ်ကိုးကွယ်ထိုက်သော အရှင်မရှိ၊ မုဟမ္မဒ် သခင်သည် အလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ ကျေးကျွန် နှင့် စေလွှတ်တော်မူခြင်းခံရသော နဗီတမန်တော် ဖြစ်တော်မူ၏။" ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်ကလေးသာ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြအပ်ပါတယ်။
ညီငယ် အပါအဝင် စာရှုသူအားလုံး အပေါ် စလာမ် ငြိမ်းချမ်းသာယာမှု အဖြာဖြာ ကျရောက်ပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted: 06 Oct 2012 03:32 AM PDT
"Saya juga akan ke Bukit Aman hari Jumaat dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) yang mahu mengambil keterangan selepas berita mengenai kes ini disiarkan di media.
"Insya-Allah, saya akan beri kerjasama sepenuhnya kepada pihak berkenaan," katanya - Mstar
"Saya bagaimanapun gembira kerana saya dapat mempertahankan prinsip saya dan berkata "tidak" kepada rasuah," ujarnya kepada mStar Online pada Jumaat.
"Rakan-rakan saya tidak memberikan nombor telefon saya kerana bimbang perkara yang tidak diingini.
"Saya bimbang kenapa orang yang mendakwa pegawai polis tidak mempunyai nombor telefon bimbit saya sedangkan sebelum ini pihak-pihak berkenaan telah berhubung secara terus dengan saya," katanya.
Posted: 06 Oct 2012 12:03 AM PDT
Aung Tin shared Khin Sein's photo.
၁။ တော်လှန်ရေးကောင်စီ လုပ်တယ်။
၂။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ လုပ်တယ်။
၃။ အမြုတေပါတီက ပြည်သူ့ပါတီ လုပ်တယ်။
၄။ လူထုက တစ်ခဲနက် ထောက်ခံရေးဆွဲတဲ့ တစ်ပါတီ အာဏာရှင် ဖွဲ့စည်းပုံကြီး ရေးဆွဲပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်းက အာဏာလွှဲတယ်ဆိုပြီး အထွက်ပြလိုက်တယ်။
၅။ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလည် ဦးနေဝင်းက အာဏာကို လွှဲယူတယ်ဆိုပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း သူတို့ဘဲ အဝင်ပြန်ပြတယ်။
၆။ ပါတီကို ဖျက်ပြီး နဝတလုပ် အာဏာဆက်ယူတယ်။
၇။ နဝတကို ဖျက်ပြီး နအဖလုပ် အာဏာကို ဆက်ယူတယ်။
၈။ ၁၃နှစ်ကြာတဲ့ ကမ္ဘာ့အရှည်ကြာဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံရေးဆွဲရေးလုပ်ပြီး ရွေးကောက်ပဲလုပ် အာဏာအပ်ပြန်တော့ ဒီစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဘဲ ဖြစ်နေပြန်တယ်။ နှစ်ငါးဆယ်ကျော်အတွင်းမှာ အပြောင်းအလဲတွေ
(၈)ခါလောက်လုပ်တယ်ဆိုပြီး ဒုံရင်း ဒုံရင်း စစ်ဗိုလ်တွေဘဲ အာဏာဆက်ရှိနေပြန်တယ်။ နောက်ထပ် ဆယ်စုနှစ် ဘယ်နှစ်စုလောက် ဘယ်နှစ်ခါလောက် ခံလက်စနဲ့ ဆက်ခံရအုံးမှာလဲဗျာ။
By hook or by crook From Wikipedia, the free encyclopedia
Posted: 05 Oct 2012 11:30 PM PDT
Source: After clashes, plight of segregated Muslims isachallenge to Myanmar democracy hopes By Todd Pitman, The Associated Press
In this photo taken on Sept. 8, 2012,aMuslim women preparesameal atarefugee camp in Sittwe, Rakhine State, western Myanmar. Three-and-a-half months after some of the bloodiest clashes inageneration between Myanmar's ethnic Rakhine Buddhists and stateless Muslims known as Rohingya left the western town of Sittwe in flames, nobody is quite sure when -or even if- the Rohingya will be allowed to resume the lives they once lived here. (AP Photo/Khin Maung Win)
SITTWE, Myanmar – There are no Muslim faithful in most of this crumbling town's main mosques anymore, no Muslim students at its university.
The crisis in western Myanmar goes back decades and is rooted inahighly controversial dispute over where the region's Muslim inhabitants are really from. Although many Rohingya have lived in Myanmar for generations, they are widely denigrated here as foreigners — intruders who came from neighbouring Bangladesh to steal scarce land.
Speaking toadelegation of visiting American diplomats earlier this month, Border Affairs Minister Lt. Gen. Thein Htay described Sittwe's new status quo. Drawing his finger acrossacity map, he said there are now "lines that cannot be crossed" by either side, or else "there will be aggression … there will be disputes."
Elsewhere in Rakhine state, the army has resumed forced labour against Muslims, ordering villagers to cultivate the military's paddy fields, act as porters and rebuild destroyed homes, according toareport by the Arakan Project, an activist group.
"I feel nothing for those people now," he said. "After what happened … they cannot be trusted anymore. To tell the truth, we want them out of here."
"We may have to build another market centre, another trading centre, another port" for the Rohingya, he said, because it will be "very difficult otherwise."
Posted: 06 Oct 2012 01:01 AM PDT
Posted: 05 Oct 2012 10:05 PM PDT
Source: နှစ်ခြမ်းကွဲ စစ်တွေ
စပြိုကျပျက်စီးနေတဲ့ ဒီမြို့ရဲ့ ဗလီအများစုမှာ ဝတ်ပြုဆုတောင်းမယ့် မွတ်ဆလင်တွေ တယောက်မှ မရှိတော့ဘူး။ တက္ကသိုလ်ထဲမှာလည်း မွတ်ဆလင်ကျောင်းသား တယောက်မှ မရှိတော့ဘူး။
သူတို့တွေ ဈေးမှာလည်း မရှိကြတော့သလို ဆိပ်ကမ်းမှာလည်း သူတို့ကို မတွေ့ရတော့ဘူး။ မြို့ထဲက လမ်းပေါ် လမ်းလျှောက်ဖို့တောင် သူတို့တွေ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေကြပါပြီ။
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ ရိုဟင်ဂျာလို့ သိကြတဲ့ နိုင်ငံမဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ အကြား သွေးသံရဲရဲ ပဋိပက္ခတွေဖြစ်ခဲ့တာ ၃ လခွဲ ရှိသွားပေမယ့် စစ်တွေမြို့ကြီးကတော့ အမုန်း မီးတောက်မီးလျှံတွေကြား ရှိနေဆဲပါ။ မွတ်ဆလင်တွေ သူတို့နေခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီနေရာမှာ အရင်လို ပြန်နေခွင့် ဘယ်တော့ရမလဲ ဒါမှမဟုတ် ပြန်နေခွင့်တောင် ရပါ့မလားဆိုတာ ဘယ်သူမှ အသေအချာ မသိပါဘူး။
ဒီပဋိပက္ခဟာ စစ်တွေမြို့ရဲ့ လူဦးရေ အနေအထားကို အခြေခံအားဖြင့် ပြောင်းလဲစေခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာအစိုးရက ကမ္ဘာ ကြီးကို ကတိပေးခဲ့တဲ့ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ အခုပဋိပက္ခက ဖီလာဆန့်ကျင်ပါပဲ။
စစ်တွေမြို့ထဲမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ သွားလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ၇၅၀၀၀ ကတော့ စစ်တွေမြို့ အပြင်ဖက်က ယာယီဒုက္ခသည်စခန်းတွေထဲမှာနဲ့ မြို့ထဲမှာ ပိတ်မိနေကြပါတယ်။ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြု ခံရမှာကို ကြောက်ရွံ့တာမို့ သူတို့တွေ အပြင်မထွက်ရဲကြပါဘူး။
မြို့ထဲမှာရှိတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေဟာလည်း သီးခြားခွဲထုတ်ခံထားရတာမို့ မြို့ပြင်က မွတ်ဆလင်တွေနဲ့ ဘဝတူပါပဲ။
"ကျနော်တို့က ဒီမှာ အကျဉ်းသားတွေလို နေနေရတာပါ" လို့ ဦးသန့်ဇင်က ပြောပါတယ်။ သူက မီးရှို့မခံရဘဲ ကျန်ခဲ့တဲ့ စစ်တွေမြို့လယ်က ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဇွန်လကတည်းက ပုန်းနေခဲ့သူပါ။
အသက် ၄၇ နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးသန့်ဇင်ဟာ သူ့အိမ်ကနေထွက်ဖို့ အရမ်းကြောက်တာမို့ အလုပ်လည်း ဘယ်လိုမှ လုပ်လို့ မရပါဘူး။ ဈေးကြီးထဲက သူ့ရဲ့ အပြာရောင် သစ်သားတံခါးနဲ့ ဆေးဆိုင်လေးဟာလည်း လူသူကင်းမဲ့နေပါ တယ်။ အဲ့ဒီဈေးထဲကို လောလောဆယ် ရခိုင်တွေပဲ ဝင်ခွင့်ပြုတာကိုး။
ရခိုင်ပြည်နယ်က ပြဿနာဟာ ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီ ကြာနေပါပြီ။ ဒေသတွင်းနေထိုင်ကြတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ ဘယ်ကနေ လာကြသလဲဆိုတဲ့အပေါ် အငြင်းပွားရာကနေ ဒီပြဿနာ အမြစ်တွယ်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မွတ်ဆလင် အများ အပြား မြန်မာပြည်မှာ မျိုးဆက် တဆက်ပြီးတဆက် နေလာခဲ့ကြပေမယ့် မြန်မာပြည်ထဲက မြေကို ခိုးယူဖို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့ နိုင်ငံခြားသားတွေလိုမျိုး မထီမဲ့မြင် ပြုခံရတာပါ။
မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာဦးရေ ၈ သိန်းခန့်ရှိတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂက ခန့်မှန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မြန်မာအစိုးရက သူတို့ကို နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် မပေးပါဘူး။ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကတော့ နိုင်ငံသားမပေးရတဲ့အကြောင်းရင်းထဲမှာ လူမျိုရေးကိစ္စလည်း ပါတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ ဘင်္ဂါလီစကားပြောပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမူဆလင်တွေနဲ့ဆင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာအတော်များများဟာ အသားပိုမဲ တဲ့အပြင် အကြီးအကျယ်ခွဲခြားဆက်ဆံခံရတယ်လို့ အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်အမျိုးသမီးငယ်တဦးကို မေလနှောင်းပိုင်းမှာ မွတ်ဆလင် ၃ ယောက်က မုဒိန်းကျင့်ပြီး သတ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်း ထွက်လာပြီးတဲ့နောက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ မွတ်ဆလင်တွေအကြား တင်းမာမှုတွေ ပွက်ပွက်ဆူခဲ့တာပါ။ ဇွန်လလယ်ပိုင်းမှာတော့ ဓားရှည်၊ လှံနဲ့ သံချောင်းတွေကိုင်ထားတဲ့ ၂ ဖက် အုပ်စုတွေအကြား တိုက်ခိုက်မှုတွေ ဒေသ တခုလုံး ပြန့်နှံ့သွားပါတော့တယ်။ ခန့်မှန်းခြေအရ ရခိုင်ပြည်နယ်တခုလုံးမှာ လူ ၁၀၀ ခန့် သေဆုံးပြီး ဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ ဗလီ တွေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွေနဲ့ အိမ် ၅၀၀၀ ခန့် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီလို ဖျက်ဆီးခံရတဲ့ဒဏ်ကို အခြားနေရာအများစုထက် ပိုခံရတာကတော့ စစ်တွေမြို့ပါပဲ။ အခုဆိုရင် မီးလောင် ခံရတဲ့ အုတ်ကျိုးအုတ်ပဲ့တွေနဲ့ သစ်ငုတ်တိုတွေ နေရာအနှံ့ တွေ့နေရပါတယ်။ စစ်တွေမြို့ထဲက အကြီးဆုံးရပ်ကွက်ဖြစ် တဲ့ နာဇီရပ်ကွက်ဟာ မွတ်ဆလင် ၁၀၀၀၀ လောက်နေတဲ့ ရပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေး လေ့လာစောင့်ကြည့်ရေး အဖွဲ့ (Human Rights Watch – HRW) ကတော့ တိုက်ခိုက်မှုတွေ အပြင်းထန်ဆုံး ဖြစ်နေချိန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလူစုတွေနဲ့ ပူးပေါင်း ကြံစည်ခဲ့တယ်၊ ရိုဟင်ဂျာ တွေ သူတို့ရဲ့မီးလောင်နေတဲ့အိမ်တွေကို ကြိုးစားပြီး မီးငြိမ်းနေတဲ့ အချိန်မှာတောင်မှပဲ သူတို့ကို သေနတ်နဲ့ ပစ်ခဲ့တယ် လို့ စွပ်စွဲပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို အလည်အပတ်လာရောက်တဲ့ အမေရိကန် သံကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ စက်တင်ဘာလ အစောပိုင်းမှာ တွေ့ဆုံစကားပြောတဲ့အခါ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးက စစ်တွေမြို့ရဲ့ အနေအထားသစ်ကို အသေးစိတ် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။ စစ်တွေမြို့ မြေပုံကို လက်နဲ့ ဖြတ်ဆွဲပြီး သူက အခုဆိုရင် ဟိုဖက်အုပ်စု ဒီဖက်အုပ်စု "မကျော်ရတဲ့ လိုင်းတွေရှိတယ်၊" အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင် "ရန်လိုတာတွေ၊ ဒေါသတကြီး ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတာတွေ ရှိ လိမ့်မယ်" လို့ ဆိုပါတယ်။
"ကျနော်တို့ ဖြစ်ချင်တာ အဲ့ဒီလိုမျိုး မဟုတ်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် ဒါက ကျနော်တို့ တကယ် ကြုံတွေ့နေရတာပါ" လို့လည်း ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး အပြုံးနဲ့ ဖြည့်ပြောပါသေးတယ်။
ရဲတွေနဲ့ စစ်သားတွေက ဗလီတွေကို အကာအကွယ်ပေးနေ၊ ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို စောင့် ရှောက်ပေးနေပေမယ့် သူတို့ထိန်းချုပ်လို့မရတာ အတော်များများ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ – လူ ၃၀၀ လောက်ရှိတဲ့ ဒေသ တွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာခေါင်းဆောင်တွေ အစုအဖွဲ့က ရခိုင်တွေ ရိုဟင်ဂျာတွေနဲ့ စီးပွားရေးမလုပ်ဖို့ ဒါမှမဟုတ်လည်း သူတို့ကို စကားတောင်မပြောဖို့ တိုက်တွန်းထားတဲ့ လက်ကမ်းစာစောင်ထုတ်တာမျိုးပါ။ အကြမ်းဖက်မှုကို ရှောင်နိုင်တာ ဒီတနည်းပဲရှိတယ်လို့ အဲ့ဒီအဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။
စစ်တွေမြို့က အရင်အားလုံးရောပြီး တက်ရောက်ကုသနိုင်တဲ့ ဆေရုံးကြီးမှာ အခုဆိုရင် မွတ်ဆလင်လူနာတွေအတွက် သီးသန့် အဆောင်တခု ထားထားရပါတယ်။ တရက်မှာ ဆေးရုံကို မွတ်ဆလင်လူနာ ၄ ယောက် ရောက်လာခဲ့ပြီး သူတို့တွေ ရဲအစောင့်အရှောက်နဲ့ လာခဲ့ရတာလို့ မိသားစုဝင်တွေက ပြောပြပါတယ်။
မြို့ထဲက တက္ကသိုလ်မှာဆိုရင်လည်း အခုဆိုရင် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေပဲ ကျောင်းတက်နေကြပါတယ်။ ဈေးကြီးမှာဆို ရင်တော့ အထဲကိုဝင်ဖို့ ပလပ်စတစ်လုပ်ထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကဒ်ပြား ပါဖို့လိုပါတယ်။ ကဒ်တွေက ဈေးသယ်တွေအတွက် ပန်းရောင်နဲ့ ဈေးလာဝယ်သူတွေအတွက် အဝါရောင်ပါ။ ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက်တော့ ဘာကဒ်မှမရှိတာမို့ ဈေးထဲဝင်လို့ မရပါဘူး။
ရခိုင်ပြည်နယ် ပြဿနာဟာ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အစိုးရအတွက် အရေးကြီးဆုံး စိန်ခေါ်မှုတရပ် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လည်း အစိုးရက အရေးပေါ်အခြေအနေကြေငြာပြီး ဆူပူမှုတွေ ဆက်ပျံ့သွားမယ်ဆိုရင် တိုင်းပြည်ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းမှုကို ခြိမ်းခြောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ သတိပေးခဲ့တာပေါ့။
အခုဆိုရင် တဖက်နဲ့တဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေကို ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ၊ ပဋိပက္ခကို လေ့လာဖို့နဲ့ အဖြေရှာနိုင်တာတွေကို အစိုးရဆီ အကြံပြုဖို့ လွတ်လပ်တဲ့ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်တရပ်ကိုလည်း ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ၊ ဒါပေမယ့် အစိုးရ အနေနဲ့ ဒီပဋိပက္ခအတွက် ဒီ့ထက်ပိုဆောင်ရွက်ဖို့ နိုင်ငံရေးဆန္ဒနည်းနည်းပဲရှိတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာကိစ္စဟာ မြန်မာပြည်မှာ တကယ့်ကို ရေပန်းမစားတဲ့ အရေးကိစ္စတခု ဖြစ်ပါတယ်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကတောင် သူတို့ကိုယ်စား ပြောခဲ့ကြတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို လက်ခံတဲ့အခြားနိုင်ငံရှိရင် အဲ့ဒီနိုင်ငံတွေဆီ ပိုလိုက်သင့်တယ်လို့တောင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင်က ဇူလိုင်လမှာ ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။
"ဒီလိုအခြေအနေအောက်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ညစ်ညစ်ပတ်ပတ် စခန်းတွေထဲ ခွဲထည့်တာ၊ သူတို့တွေ နိုင်ငံကနေ ထွက်ပြေးတာနဲ့ တချို့ အခြေအနေတွေမှာ အဖမ်းခံရပြီး ထောင်ချခံရတာတွေ ကျနော်တို့ တွေ့နေရတာပေါ့" လို့ HRW ရဲ့ သုတေသီ မက်သယူး စမစ် (Matthew Smith) က ဆိုပါတယ်။ သူက ရခိုင်ပြည်နယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး မကြာ သေးခင်က ထုတ်ဝေခဲ့တဲ့ HRW အစီရင်ခံစာကို ရေးသားခဲ့သူပါ။
စစ်တွေလို နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင် "ရိုဟင်ဂျာတွေကို အမြဲတမ်း ခွဲထုတ်ပစ်မယ့် အန္တရာယ်ရှိနေတယ်၊ ဒါက ဘာသာစုံ လူမျိုးစုံရှိတဲ့ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတခုအတွက် အလားအလာ မကောင်းဘူး" လို့လည်း သူက ပြောပါ သေးတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ အစိုးရရဲ့ ကိုယ်ပိုင်စာရင်းဇယားတွေက အနိမ့်ဆုံး ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် ပြဿနာ ပိုဆိုး လာနေတာကို ညွှန်ပြနေပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုတွေ စဖြစ်တုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်တခုလုံးမှာ အိုးပစ်အိမ်ပစ်ဖြစ်ကြရတဲ့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားဦးရေ ၂၄၀၀၀ လောက် ရှိခဲ့ရကနေ အခု ၅၆၀၀ လောက်ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဦးရေကတော့ ၅၂၀၀၀ ကနေ ၇၀၀၀၀ အထိ မြင့်တက်လာပါတယ်။ အများစုက စစ်တွေမြို့ပြင်က စခန်းတွေမှာပါ။
အစိုးရကတော့ ရိုဟင်ဂျာဦးရေတိုးလာတဲ့အပေါ် အပြစ်ဖို့ပါတယ်။ သူတို့တွေက အိမ်တွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားတာမဟုတ် ဘူး၊ ဝေပေးတဲ့ အကူအညီတွေ လိုချင်လွန်းလို့ စခန်းတွေဆီ လာကြတာတဲ့။
မလုံခြုံမှုက အခုလို စခန်းတွေမှာ လူဦးရေတိုးလာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတရပ် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြဿနာဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းကာလမှာ အာဏာပိုင်တွေက မွတ်ဆလင်တွေကို သီးသန့်ပစ်မှတ်ထားတဲ့ နှိမ်နင်းမှုတခုလုပ်ပြီး ရာနဲ့ချီတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့ နိုင်ငံတကာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က စွတ်စွဲပါတယ်။ သြဂုတ်လထဲမှာ ဆိုရင်လည်း ၂ ဖက် တိုက်ခိုက်မှုတွေ ထပ်မံဖြစ်ပွားပြီး ကျောက်တော်မှာရှိတဲ့ အိမ် ၆၀၀ နီးပါး မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရတာမို့ လူ ၃၅၀၀ အိုးပစ်အိမ်ပစ်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂရဲ့ အဆိုအရ သိရပါတယ်။
ဒါ့ပြင် ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲက အခြားနေရာတွေမှာလည်း စစ်တပ်က မွတ်ဆလင်တွေကို အဓမ္မလုပ်အားပေးစေခိုင်းတာ၊ ရွာသားတွေကို တပ်စပါးခင်းတွေ စိုက်ခိုင်းတာ၊ ပေါ်တာအဖြစ်သုံးတာနဲ့ ပျက်စီးသွားတဲ့အိမ်တွေပြန်ဆောက်ခိုင်းတာ တွေ လုပ်နေတယ်လို့လည်း ရခိုင်စီမံကိန်းအဖွဲ (Arakan Project) ရဲ့ အစီရင်ခံစာထဲမှာ ရေးထားပါသေးတယ်။
စစ်တွေမှာဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်ကြောင့်ကြမှုနဲ့ မယုံကြည်မှုတွေက သိပ်ကို မြင့်မားလွန်းတာမို့ ပျက်စီးယိုယွင်းနေတဲ့ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ထဲမှာ ပြွတ်သိပ်နေကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာ ၇၀၀၀ ဟာ ဇွန်လကစလို့ အပြင်ဖက်ကို ခြေမချကြပါဘူး။ ဟိုဖက်ကနေ ဒီဖက်ကို လမ်းလျှောက်ရင် ၅ မိနစ်လောက်ပဲကြာတဲ့ ဒီရပ်ကွက်လေးဟာ စစ်တွေမြို့လယ်မှာ နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေ အမြဲတမ်းနေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်လေးဖြစ်ပါတယ်။
အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ထဲမှာ နေထိုင်ကြတဲ့ မွတ်ဆလင်တွေအတွက် အစိုးရက ဆန်ဝေပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့် ဆန်အပြင် လိုအပ်တဲ့ တခြားအရာတွေအားလုံးနီးပါးအတွက် မတန်တဆ လာဘ်ထိုးဖို့လိုတယ်လို့ အဲ့ဒီရပ်ကွက်မှာနေတဲ့ ဦးသန့် စင်က ပြောပြပါတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲမှာ ဗလီ တခုပဲရှိပြီး ဆေးခန်းလည်းမရှိ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလည်းမရှိ စာသင်ကျောင်းလည်း မရှိတာမို့ စုထားတဲ့ငွေလေးတွေ ရက်သတ္တပါတ် အနည်းငယ်အတွင်း ကုန်သွားမှာကို စိုးရိမ်မိ တယ်လို့လည်း သူက ဆိုပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ လကတည်းက အာဏာပိုင်တွေ အတင်းပိတ်ခိုင်းခဲ့တာမို့ ကလေး ၅ ယောက်ရဲ့ဖခင် ဦးသန့်စင်ဟာ ဈေးထဲက သူ့ဆိုင်ခန်းလေးကို အခုထိ ပြန်မဖွင့်နိုင်သေးပါဘူး။ တယောက်ကဆို "ဒီဆိုင်ခန်းက အခုဆို ရခိုင်တွေ အတွက်ဖြစ်သွားပြီ" လို့ သူ့ကို ပြောတယ်တဲ့။
"ကျနော်တို့အားလုံး လုပ်ချင်တာကတော့ အလုပ်ရှိရာ ပြန်သွားချင်တာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ဘဝတွေ ပြန်ရဖို့ အတွက် အစိုးရက ဘာမှ အကူအညီမပေးဘူး" လို့ ဦးသန့်စင်က ဆက်ပြောပါတယ်။
အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ထဲဝင်တဲ့ လမ်း ၄ လမ်းစလုံးကို ရဲတွေ စောင့်ကြပ်နေတာပါ။ သံဆူးကြိုးတွေ၊ သစ်သားတွေနဲ့ ပိတ်ဆုံ့ကာရံထားတဲ့ ရပ်ကွက်အပြင်ဖက်မှာတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေ လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ လမ်းလျှောက်နေ ကြပါတယ်။ တခါတရံမှာလည်း လူမျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရှုတ်ချပြောသွားတာမျိုး ဒါမှမဟုတ်လည်း ရပ်ကွက်ထဲကို ခဲနဲ့ ပစ် ထည့်သွားတာမျိုးတွေ လုပ်ကြပါတယ်။
လမ်းရဲ့ဟိုဖက်ခြမ်းမှာတော့ အသက် ၅၇ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဦးအေးမြင့်တယောက် သံချေးတက်နေတဲ့ သံကုလားထိုင်မှာ နောက်မှီထိုင်ရင်း အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်ထဲက မုတ်ဆိတ်နဲ့ မွတ်ဆလင်အမျိုးသားတစုကို စိုက်ကြည့်နေပါတယ်။
"အခုဆိုရင် သူတို့အတွက် ကျနော် ဘာကိုမှ မခံစားရတော့ဘူး။ ဒီကိစ္စတွေ ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက် သူတို့ကို ဆက်ယုံလို့ မရတော့ဘူး။ အမှန်အတိုင်းပြောရရင် သူတို့ကို ဒီနေရာက ထွက်သွားစေချင်တယ်" လို့ သူက ပြောပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှေ့နေချုပ် ဦးလှသိန်းကလည်း အစိုးရမှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို အဓမ္မ ခွဲထုတ်ပစ်မယ့် မူဝါဒတစုံတရာ ရှိခဲ့တယ်လို့ ပြောတာတွေအပေါ် မဟုတ်ကြောင်း ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ ဘက် ၂ ဘက်စလုံးကို ကာကွယ်ပေးဖို့ လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့တွေကို နေရာချထားခဲ့တာဖြစ်တယ်၊ သူတို့ကို ခွဲပစ်ဖို့မဟုတ်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရော ရိုဟင်ဂျာတွေကိုရော လုံခြုံတယ်လို့ခံစားရအောင် လုပ်ပေးနိုင်ဖို့ ရဲ ဒါမဟုတ် စစ်သား လုံလုံလောက်လောက် မရှိခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ ပြီးတော့ သူတို့တွေ ပြန်လည်သင့်မြတ်လာရေးမှာလည်း အလွန်ကြီးမားတဲ့ အခက်အခဲ အတား အဆီးတွေ ရှိနေသေးတဲ့အကြောင်း သူက ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်တို့ သူတို့ကို အတူ နေစေချင်တယ်၊ ဒါ ကျနော်တို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပါ၊ ဒါပေမယ့် လူတွေကို ပြောင်းဖို့ ကျနော် တို့ ဖိအားပေးလို့ မရဘူးလေ" လို့ ဦးလှသိန်းက ပြောပါတယ်။
"ဒေါသက အရှိန်မြင့်နေဆဲပဲ။ သူတို့ မိသားစုဝင်တွေ၊ အိမ်တွေ ဆုံးရှုံးသွားတာကို ဘယ်ဘက်ကမှ မေ့လို့မရဘူး ဖြစ်နေ တယ်" လို့လည်း သူက ပြောပါတယ်။
လောလောဆယ်မှာတော့ အစိုးရအနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဘဝတွေ "ပုံမှန်" ပြန်ဖြစ်လာဖို့ ဖြစ်နိုင်သမျှနည်းလမ်းတွေကို လေ့ လာမှုလုပ်နေတယ်၊ ဥပမာ – ရခိုင်ကျောင်းသားတွေက မနက်ပိုင်းမှာ တက္ကသိုလ်တက်ရင် ရိုဟင်ဂျာတွေက မွန်းလွဲပိုင်း မှာတက်တာမျိုးပေါ့ လို့လည်း သူက ဆိုပါသေးတယ်။
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဌေးရဲ့ အပြောကတော့ ပိုပြီး ဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်း ဖြစ်ပါတယ်။
သူက "ရိုဟင်ဂျာတွေအတွက် ဈေး နောက်တခု၊ ကုန်သွယ်ရေးစင်တာ နောက်တခု၊ ဆိပ်ကမ်း နောက်တခု ကျနော်တို့ ထပ်ဆောက်ရကောင်း ဆောက်ရလိမ့်မယ်။ အဲ့ဒီလိုမှမဟုတ်ရင် "သိပ်ခက်လိမ့်မယ်" တဲ့။
The Associated Press သတင်းဌာနက ရေးသားသော ဆောင်းပါး (After clashes, plight of segregated Muslims isachallenge to Myanmar democracy hopes) ကို ဆီလျော်အောင် ပြန်ဆိုဖော်ပြသည်။
Posted: 05 Oct 2012 09:58 PM PDT
Source: Hot News ဂျာနယ် ဆောင်ပါးရှင် နိုင်ထက်ရှိန်(ဟင်္သာတ)သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
Hot News စာစောင်ပါ အနောက် တံခါးမှဧည့်သည်များ အခန်းဆက်ဆောင်း ပါးများသည် အလွန်စိတ်ဝင်စားဖွယ် ကောင်းပြီး ဗဟုသုတရစေတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်း ဦးစွာပြောကြား လိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ စိတ်ထဲဘ၀င်မကျဖြစ်နေ တာလေးတွေကို ဆွေးနွေးလိုပါတယ်။ (၁၉.၉.၁၂)နေ့ထုတ် Hot News စာ စောင်ပါ အနောက်တံခါးမှဧည့်သည်များ (၅)နောက်ဆုံးကော်လံမှာ
""ခရစ်သက္က ရာဇ် (၁၆၆၅)ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် ရခိုင် ပြည်သားအစ္စလာမ်ဘာသာဝင်လူမျိုးကို မူ အာရဗ်ဘာသာဖြင့်(ရိုဟင်ဂျာ)ဟုခေါ် ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှ စ၍ ရခိုင်ပြည် သား အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်အုပ်စုတို့ကို (ရိုဟင် ဂျာလူမျိုး)ဟုလည်းခေါ်တွင်လာကြပါ သည် စသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးနဲ့ ပတ်သက် တဲ့အချက်တွေ ကို ရှေးယ ခင်နှစ်ပေါင်း များစွာက ပဲရှိခဲ့လေဟန် သမိုင်းဖြစ်စဉ်နဲ့ ရောထွေးပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေ ရန် ရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားညီညွတ်ရေး အဖွဲ့ချုပ် ကရိုဟင်ဂျာတို့၏ဘ၀ (၁၉၈၉) ခုနှစ် ထုတ် စာစောင် မှာ ရေးသားဖော်ပြ ခဲ့ပါတယ်""
အဲဒီအချက်တွေဟာ မှားယွင်းတယ် လို့ ကိုနိုင်ထက်ရှိန်သက်သေ သာဓက အထောက်အထားအစုံနဲ့ပြသနိုင်ပါသလား။ ကိုနိုင်ထက်ရှိန်ရဲ့ဆောင်းပါးတွေဟာ ပညာရှင်တစ်ဦးရဲ့ သမာသမတ်ကျတဲ့ ဆောင်းပါးမဆန်ဘဲ ပေါ်လစီဆန်နေတာ တွေ့ရပါတယ်။အဲဒီလောက်နဲ့မရဘူးဗျ။ ခေတ်အဆက်ဆက်က သတင်းမှောင်ချ ထားပြီး Brainwash ပြုလုပ်ခြင်း ခံရတဲ့ မြန်မာပြည်သူလူထုတချို့က အဲဒီလောက် ပြောရုံနဲ့လက်ခံမှာဖြစ်ပေမယ့် နိုင်ငံတကာ နဲ့ ယှဉ်ပြီးဆွေးနွေးငြင်းခုံကြတဲ့အခါမှာ They will not hold water လို့ပြောချင် တယ်ဗျ။
နောက်ပြီး (၂၀.၉.၁၂)ခုထုတ် Hot News ရဲ့ အနောက်တံခါးမှဧည့် သည်များ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးမှာ
""မေယုဒေသ(ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဒေသ) မှာရှိတဲ့ ရိုဟင်ဂျာအမည်ခံ စစ်တကောင်း သားဘင်္ဂါလီလူမျိုးတွေအနေနဲ့ကတော့ ကမန်၊မြေဒူး အဆက်အနွယ် ဗမာမူဆလင် များနှင့်မတူဘဲ သီးခြားဘာသာစကား၊ ဓလေ့ထုံးစံ၊၀တ်စားဆင်ယင်မှုတွေထူးခြား စွာ ကွဲပြားခြားနားနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါ တယ်""
အဲဒါဘာကိုပြောချင်တာပါလဲ။ It does not prove anything. ရိုဟင်ဂျာ ပါဆိုမှ ကမန်၊မြေဒူးလိုဝတ်ပါ့ နေပါ့မလား ဗျာ။သီးခြားဘာသာစကား၊ဓလေ့ထုံးစံ၊ ၀တ်စားဆင်ယင်မှုရှိခြင်းသည်ပင်လျှင် သီးခြားလူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာ ညွှန်ပြမနေ ဘူးလားဗျ။
နောက်ပြီး အဲဒီဆောင်းပါးကော်လံ (၄)မှာ
"ရခိုင်လူမျိုးတွေဟာ အမျိုးသီလ ကိုစောင့်ထိန်းကြသူများဖြစ်တဲ့အတွက် မူဆလင်ဘာသာဝင်များနဲ့ လက်ထပ် ထိမ်းမြားလေ့မရှိကြပါဘူး။ဒါကြောင့် ရခိုင် လူမျိုးများဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာဖြစ် ကြပါတယ်။မူဆလင်ဘာသာကို ကိုးကွယ် သက်ဝင်ခြင်းမရှိကြတဲ့အတွက် (ရခိုင် မူ ဆလင်)ဆိုတာလုံးဝမရှိပါဘူး"
ကောင်း တာပေါ့ဗျာ။ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာ သာတွေနဲ့ သွေးမနှောနိုင်တဲ့အတွက် လူမျို လို့ လူမျိုးပျောက်မှာ မကြောက်ရတော့ဘူး။တရုတ်ဘက်ကို မြန်မာအမျိုးသမီး ကလေးများ လူကုန်ကူးမခံရအောင် ပိုပြီး အားစိုက်ကြိုးပမ်းနိုင်တာပေါ့ဗျာ။
"တကယ်တော့ ရိုဟင်ဂျာ အမည်ရှိတဲ့လူမျိုးဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ သော်လည်းကောင်း၊ရခိုင်ပြည်နယ်အဖြစ် ထင်ရှားရှိစဉ်ကသော်လည်းကောင်း၊ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာ ဘယ်တိုင်းပြည်မှာ မှမရှိခဲ့သော အမည်ဖြစ်ပါသည်။""
လို့ ကော်လံ(၅)မှာ ဆိုထားတယ်ဗျ။
အဲဒါကတော့ Nothing is further than the truth. တက်တက် စင်အောင် လွဲနေ ပြီဗျ။ Dr.Francis Buchanan ရေးသား ပြီး (၁၇၉၉)ခုနှစ်မှာထုတ်ဝေတဲ့ 'A Comparative Vocabulary of Some of the Languages Spoken in the Burma Empire' သုတေသနစာအုပ်ထဲမှာပါတဲ့ ပထမ အချက်က
'The Mohamendans settled at Arakan call the country Rovingyaw, the Persians call it Rekan.'
"ရခိုင်တွင် အခြေစိုက်နေထိုင်ကြ သော မဟာမေဒင်လူမျိုးများသည် အဆို ပါဒေသကို Rovingyaw ဟုခေါ်ဝေါ်ပြီး ပါရှန်လူမျိုးများက Rekan ဟုခေါ်ဝေါ် ကြသည်"
' I shall now add three dialects, spoken in the Burma Empire, but evidently derived from the language of the Hindu nation.The first is that spoken by the Mohammedans, who have long settled in Arakan, and who call themselves Rooinga,or natives of Arakan.
"ကျွန်ုပ်ဖြည့်စွက်တင်ပြလိုသည့် ဒေသိယစကား ၃မျိုးမှာ ဗမာအင်ပါယာ အတွင်းပြောဆိုနေသော်လည်း အိန်္ဒိယ နိုင်ငံရှိဘာသာစကားမှ ဆင်းသက်လာ သည်။ ပထမဒေသိယ ဘာသာ စကားမှာ ရခိုင်ဒေသတွင် အခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့သည် မှာကြာပြီဖြစ်သည့် မိမိကိုယ်ကို Rooinga (သို့မဟုတ်)ရခိုင်သားဟုခေါ်ဝေါ်သည့် မဟာမေဒင်လူမျိုး တို့ ပြောသည့် စကား ဖြစ် သည်"
နောက်ပြီး Dr. Buchanan က အဲဒီ Rooinga တို့ရဲ့ ဘာသာစကား၊ရခိုင်ဟိန္ဒူ တို့ရဲ့ Rossawn ဘာသာစကား၊ Banga (ရခိုင်ဘင်္ဂါလီ)တို့ရဲ့ ဘာသာစကားတို့တူ ညီပုံ၊ခြားနား ပုံတွေ ကို ဇယားနဲ့တင်ပြထား သေးတယ်။ အဲဒီတော့အရေးကြီးတဲ့ အချက်များ က- (၁) ရိုဟင်ဂျာများသည် ၁၇၉၉မ တိုင်မီ နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက ရခိုင် ဒေသတွင် အခြေစိုက်နေ ထိုင်ခဲ့ကြ သည်။(၂) ရိုဟင်ဂျာကသတ်သတ်၊ ဘင်္ဂါလီက သတ်သတ်ဖြစ်သည်ဆိုတာ ပေါ်လွင်နေ သည်။
အဲဒါကြောင့် ကိုနိုင်ထက်ရှိန်ပြော တဲ့
"(ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကို လူ မျိုးအမည်နဲ့ ခေါ်ဝေါ်သုံးစွဲလာမယ်ဆိုပါ က နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာလာတဲ့ အခါမှာ ဘာသာဗေဒသဘောအရ ပြန် လည်အစကောက်ရင် (ရိုဟင်ဂျာ)ဆိုတာ (ရခိုင်ပြည်သား)ဆိုတဲ့ တိုင်းရင်းသားဖြစ် လာစေရန်၊ကြို တင်ဖန်တီး ထားသော ဝေါဟာ ရဖြစ်ကြောင်းတွေ့ နိုင် ပါတယ်"
ဆို တဲ့ ကောက်ချက်ဟာ လေဖမ်းဝါးရမ်း ချည်ထားခြင်းသာဖြစ်ပါကြောင်း။
Posted: 05 Oct 2012 09:43 PM PDT
Source:ရှိတ်ကားစ်ရွာ၊ သာကီဝင်နှင့် မျိုးဖျောက်ချင်သူများအကြောင်း
ဗိုလ်ခင်ညွန့် မိုးကောင်းတုန်းက သူ့နှုတ်ထွက်မိန့်တွေ ဗျာဒိတ်လိုလို နှင့် တမိုးလုံး ဖျောက်ဆိတ် ဖြစ်ခဲ့သည်ကို ပြန်အမှတ်ရမိနေ၏။ သူက ဓါးထက်သလောက် လက်သံလည်းပြောင်၏။
"မြန်မာ့အားကစားကမ္ဘာကိုလွှမ်းစေရမည်" ဆိုပြီး လုပ်တော့ ထောင်ထဲမှာ ကိုညွန့်ဇော်က
"ဘာလဲ.. ထုတ်ဆီးတိုးနဲ့ကြက်ဖခွပ်တမ်းလား" ဟု လှမ်းထေ့ဖူး၏။
"အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ပါသည်" ဆိုတုန်း ကလည်း အပြင်ကသူငယ် ချင်းတယောက်က
"ကြောက်တော်မူရင် ပေါက်ဖော်သာယူလေ..မမညွန့်" ဆိုပြီး အငေါ်တူးဖူး၏။
တချို့က ထိုကိစ္စကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အား တဲ့(ဒဲ့)ချခြင်းသက်သက်ဟုမြင်ကြ၏။ မဖြစ်နိုင်စရာမရှိပါ။ နံမည်အရင်းတပ်ပြီးမပြောရုံတမယ် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးထိုးနှက်မှုများ။ ထိုခေါင်းစဉ်အောက်က ရေးသမျှစာ ကို နိုင်ငံခြားသား ဆန့်ကျင်ရေး အကာသား နှင့် ဖုံးထားတာ ထင်ရှား၏။ စေ့စေ့တွေးလျှင် သူတို့ တကယ်မပျောက်စေချင်တာ က စစ်မျိုးစစ်နွယ်မှန်း ပေါ်လွင်၏။ အာဏာ နှင့် စပ်လျှင် လူမျိုးကြီးဝါဒ ကိုကျင့်သုံးပြီးဘယ်ဘာသာ ဘယ်လူမျိုးကိုမဆို ခြွင်းချက်မထား နှိပ်ကွပ်မည့်လူမျိုးကို ဆိုလိုကြောင်းပေါ်၏။
ဗမာ့တပ်မတော်တွင် စစ်ဗိုလ်စစ်သားများ နိုင်ငံခြားသူ နှင့် ယူလို့မဖြစ်။ မယူရဟု မပြော။ ယူလို့ မရအောင် လုပ်ထား၏။ တိုင်းခြားသူ ကိုယူဖို့ မဆိုနှင့် တပြည်ထဲ နေ လူမျိုးစုတွေ ထဲက ဗုဒ္ဓဘာသာ မဟုတ်သည့် စစ်ဗိုလ်များ စစ်ဘက်ရာထူးကြီးကြီး ကို မျှော်လင့်လို့မရတော့ သည်မှာ ကြာပြီ။ ထို့ကြောင့် စစ်ဗိုလ်တချို့ အာဏာ နှင့် ဘာသာလဲ ကြသည်လည်း ရှိ၏။ ဘာမှပြောစရာမရှိ။ သူတို့ကိစ္စ။ သာသနာပြုမင်း လို့ကြွေးကြော်၊ ခံယူ၊ အပြလည်း လုပ်သည့် ထိပ်သီးတွေ က ၂၀၀၇ တွင် ရတနာသုံးပါးမှတပါး လမ်းပေါ်ထွက်လာပြီး မေတ္တာပို့ရင်း သူတို့ကို ဆင်းခိုင်း၏။ ဒါကို "တိုက်ရိုက်အာဏာခြိမ်းခြောက်မှု" အဖြစ်ယူပြီး "အာဏာနှင့်သံသရာ" လဲလိုက်၏။ သည်တော့ အောက်က လူတွေ "အာဏာ နှင့် ဘာသာ" လဲခြင်း အား နားလည်ရ ပိုလွယ်သွား၏။ ထိုသူတို့နှုတ်ထွက် အမျိုးပျောက် မှာ စိုးကြောက်ခြင်းကို လည်း ပိုထင်ရှားလာစေသည်ဟု ယူဆမိ၏။
စဉ်းစားရမှာတွေ ရှိလာ၏။ သူတို့ အပြောအဆိုတွေ တွင် အမျိုးပျောက်ခြင်းသည် ကြောက်စရာဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးမပျောက်ရေး လုပ်ရမည်။ မပျောက်ရေးအတွက် လူမျိုးတူသာယူ။ လူမျိုးမတူသူကိုမယူနှင့်။ မတူသည့်လူမျိုး ကို ယူလျှင်သွေးနှောပြီး မျိုးမစစ်တွေဖြစ် လာမည်။ မျိုးမစစ် တွေသည် မျိုးမချစ်ကြ။ မျိုးစစ် မှ မျိုးချစ်သည်။ ထို့ကြောင့် မျိုးချစ် ဖို့ မျိုးစစ် ရမည်။ မျိုးစစ်ပြီး မျိုးချစ်ရေး အတွက် အမျိုးတူ ကို သာ ယူဆိုသည့် လောဂျစ်တခု ကို အတိအလင်း ထူထောင်လိုက်၏။ ဗမာပြည် သည် နယ်ချဲ့နှင့်ဖက်ဆစ်အောက် တွင် နင်းပြား ဖြစ်ဖူးခဲ့၏။ တိုင်းတပါးသား တို့၏ ချယ်လှယ်မှု ကိုမချိမဆန် ခံခဲ့ရ၏။ အမျိုးသားရေးဝါဒ အခြေခံ ပဒေသရာဇ်ခေတ်လွန် ဗမာ့နိုင်ငံရေးစင်မြင့် သည် အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာနှင့်ဖွင့်ရ၏။ နယ်ချဲ့သမား၊ အလိုတော်ရိ နှင့် လူကပြားတို့ ၏ သစ္စာဖေါက်မှု လည်းခံခဲ့ဖူး၏။ သို့ဖြင့် တိုင်းတပါးသား အား အယုံနည်းခြင်း နှင့် အတူ ဆက်ဆံရ မှာစိုးရွံ့စိတ် လည်း အထိုက်အလျှောက် အမြစ်တွယ် လာ၏။ ဂျပန်ဟုဆိုလျှင် ဖက်ဆစ်၊ အင်္ဂလိပ်ဟုဆိုလျှင် နယ်ချဲ့ဟု တွဲမြင်သူများ လည်း ရှိနေနိုင် သေး၏။ ဤတွင် ထိုသူတို့အကြား ၌ သူတို့တရား (လောဂျစ်) သည် အထိုက်အလျှောက် တာ သွား၏။ တိုင်းတပါးသား နှင့် ထိမ်းမြားခြင်း သည်အပြစ်လိုလို၊ အမျိုးကို သစ္စာဖေါက်တာ လိုလို၊ အမျိုးဂုဏ် မစောင့်တာလိုလို တွေ မြင်သူတွေမြင်လာ၏။
ဤတွင် ကျနော် ၂၀၀၉ ခု၊ ဒီဇင်ဘာထုတ် စတိုင်သစ်မဂ္ဂဇင်း အမှတ် (၁၃) မှ ဆောင်းပါးရှင်ကျော်လှိုင်-ဝိဇ္ဇာဂုဏ်ထူး၊ မဟာဝိဇ္ဇာ(သက္ကတ)၏ ဗုဒ္ဓ လောကသား တို့၏ အားထား ကိုးကွယ်ရာ (၁၂) ခေါင်းစဉ် နှင့် ဆောင်းပါးကို ပြန်အမှတ်ရမိ၏။
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာတို့သည် ဗုဒ္ဓတ္ထစရိယ ပြီးစေကာ မူ လောကတ္ထစရိယ နှင့် ဉာတ္ထစရိယ ကိုလည်း ကျင့်တော် မူရမြဲဖြစ်ကြောင်း ပြောပြပြီး ရောဟဏီမြစ်ရေကိစ္စအပေါ် ကပိလဝတ် နှင့် ကောလိယ မှသာကီဝင် တို့အချင်းချင်း စစ်ခင်းကြတော့မည့် ဆဲဆဲအခြေအနေ ၌ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ က ရန်ငြိမ်းကြောင်း တရားဟောပြီး စစ်ပွဲကို စဲစေ တော်မူကြောင်း ကို အသေးစိတ် ရေးထား၏။ ထို့နောက် သာကီဝင်တို ၏အမျိုးမာန်ကြီးမှု ကို – (သာကီဝင်တို့ သည် အမျိုးမာန်ကြီး၏။ မိမိတို့အမျိုးထဲ မှာ အခြားအမျိုးရော မှာ ကိုလက်မခံ။ အမျိုးမစပ် မြတ်သော မင်းမျိုး …အသမ္ဘိန္နခတ္တိယ ဟူသော ဂုဏ်ကို ထိန်းကြသည်။ ထို့ကြောင့် လည်း ဗုဒ္ဓနှင့် အမျိုးစပ် ချင်သော ကောသလမင်းက သာကီဝင်မင်းသမီးတပါးပေးပါ ဟု တောင်းလာသော အခါ အမျိုးချင်းမတူသည့် အတွက် မဟာနာမသာကီဝင် နှင့် ကျွန်မက မွေးသော ဝါသဘခတ္တိယာ ကို သာကီဝင်မင်းသမီး လုပ်၍ ပေးလိုက်ပါသည် ။ ဤ ဝါသဘခတ္တိယာ မှာ ဝိဋဋ္နူဘ ကို ဖွားပါသည်။ ဝိဋဋ္နူဘ အရွယ်ရောက်သော အခါ သာကီဝင် အဘိုးအဘွားတို့ ထံ အလည်သွားသည်။ သူ့ကို ကန်တော့ မည့်သူ တဦးမျှမရှိ။ သူကသာ သာကီဝင်တို့ကို ကန်တော့ ခဲ့ ရသည်။ သာဝတ္ထိသို့ အပြန် တွင် သူထိုင်သွားရာ နေရာကို"ကျွန်မသား ထိုင်သွားသောနေရာ" ဟု ကျွန်မ တယောက်က နို့ရည်နှင့် ဆေးနေသည်ကို အကြောင်း အားလျော် စွာ သိလိုက်ရသည်။ ဤတွင် သာကီဝင် တို့၏ သွေးဖြင့် သူထိုင်သောနေရာ ကို ဆေးမည် ဟု ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်တော့ သည်။
ထို့ကြောင့် သူမင်းဖြစ်သော အခါ သာကီဝင်တို့ ကို သတ်အံ့ ဟု ကပိလဝတ်ပြည် သို့ စစ်ချီလေတော့ သည်။ ဗုဒ္ဓလည်း ကပိလဝတ်သာကီဝင်တို့ ကို ကာကွယ်ရန်အလို့ငှာ ကပိလဝတ်ပြည်တော် သို့ ကြွတော်မူ ၍ ကပိလဝတ်ပြည်အနီးအရိပ် ကျဲသောသစ်ပင်အောက်၌ ထိုင်နေတော်မူ၏။ ထိုအပင်နှင့်မနီးမဝေးသောအရပ် ဝိဋဋ္နူဘ၏နယ်စပ်၌ အရိပ်ကောင်း သော ညောင်ပင်တပင် ရှိ၏။ ဝိဋဋ္နူဘ သည် ဗုဒ္ဓကိုမြင်လျှင် လာရောက် ၍ ရိုသေမြတ်နိုးရှိခိုးပူဇော်ပြီး -"အရှင်ဘုရား အဘယ်ကြောင့် ဤအရပ်သို့ ကြွလာတော် မူပါသနည်း ။ တပည့်တော်၏ နယ်စပ် ၌ အရိပ်ကောင်းသော ညောင်ပင်ရှိပါသည်။ ထိုညောင်ပင်အောက် ၌ ထိုင်တော်မူပါ" ဟုလျှောက်၏။ ဗုဒ္ဓက "ရှိပါစေ မဟာရာဇ ..ဆွေမျိုးတို့၏ အရိပ်မည်သည် ကား အေးမြလှပါ၏။" ဟု မိန့်တော်မူ၏။ ဝိဋဋ္နူဘက "ဆွေမျိုးတို့ကိုစောင့်ရှောက် ရန် ဗုဒ္ဓကြွလာတော်မူခြင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်" ဟုသိ၍ ဗုဒ္ဓကို ရိုသေစွာရှိခိုးပြီး မိမိ၏စစ်တပ်ကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားလေ၏။
ဝိဋဋ္နူဘသည် ကပိလဝတ်သို့ ၃ ကြိမ်တိုင် စစ်ချီ၏။ ဗုဒ္ဓကလည်း ၃ ကြိမ်တိုင်တိုင် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တော်မူ၏။ သာကီဝင်တို့အပေါ်အငြိုး ကြီးလှသော ဝိဋဋ္နူဘသည် သာကီဝင်တို့ကို မျိုးဖြုတ်ရန် အတွက် စတုတ္ထအကြိမ် စစ်ချီပြန်၏။ ဤ တကြိမ်တွင်မူကား ဗုဒ္ဓကြွတော်မူ၍ မတားတော့ချေ။ သာကီဝင်တို့ မလွဲမသွေပျက်စီးရတော့မည့်ကိန်း ဆိုက်ချေပြီဖြစ်ရကား ဗုဒ္ဓကြွသွားကာ တား၍ ရတော့မည်မဟုတ်ချေ။ သာကီဝင်တို့သည် ဝိဋဋ္နူဘစစ်တပ်နှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ လေးအတတ် ၌ တဘက်ကမ်းခတ်တတ် သူများဖြစ်လင့်ကစား လူမသတ်သည့် မင်းများ ဖြစ်၍ ခြောက်ရုံလှန့်ရုံမျှသာ မြားကိုပစ်ပါသည်။ ဝိဋဋ္နူဘ စစ်သည်တဦးတယောက် မျှ မြားမခချေ။ သို့သော် သာကီဝင်အမျိုးဇာတ် ကို ဝိဋဋ္နူဘသည် သာကီဝင် မှန်က နို့စို့ကိုမျှ မကျန်ရစ်စေရ ဘဲ သတ်ဖြတ်ပါတော့သည်။ ဤနည်းဖြင့်သာကီဝင်တို့ ပြုတ်ပြုတ်ပြန်း၍ အမျိုးဇာတ် ပါ ဆိတ်သုဉ်းခဲ့ရပါတော့သည်။
ယနေ့ မျက်မှောက်ကာလ ၌ ဗုဒ္ဓဆွေတော်မျိုးတော် သာကီဝင် ကား ဤသူဤသူ ပင် တည်းဟု လက်ညှိုးထိုး၍ပြစရာတဦးတလေမျှ မကျန်တော့ချေ။ တဦးတလေ ကျန်သေးသည် ဆိုစေ၊ အချိန်တိုအတွင်း မှာ လုံးဝပျောက်ကွယ်ရချေတော့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆို သော် တပါးအမျိုး နှင့် မနှောသော အသမ္ဘိန္နခတ္တိယဂုဏ် ကို ထိန်းသည်ဖြစ်ရာ အဘယ်မှာ မျိုးပွား နိုင် အံ့နည်း။ သိပ္ပံသဘော အရ လည်း ဆွေမျိုးရင်းချာ ချင်း အိမ်ထောင်ပြုသည်ဖြစ်ရာ အမျိုးဇာတ်ပျက်သုဉ်းဖို့ရာ ပို၍သေချာပါသည်။ အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်စရာ ဟု တွေးကာ အမျိုးမပျောက် အောင် မည်မျှပင်ထိန်းထိန်း အမျိုးကတော့ ပျောက် မှာ သေချာသည်။ ဗုဒ္ဓ၏ သာကီဝင်အနွယ်တော် တို့ ဘယ်ရောက်ကုန်ပါသနည်း။ သံဝေဂရစရာ ပင် ဖြစ်သည်။ ငါတို့ မြန်မာရှေးဟောင်းပျူလူမျိုး တွေ ကော ဘယ်ရောက် ကုန်ပါ သနည်း။ လောက တွင် အမြတ်ဆုံး တန်ခိုးအကြီးဆုံး လူသားစွမ်းအားရှင် ဗုဒ္ဓကိုယ်တော် တိုင်ပင် မိမိ ၏ အသမ္ဘိန္နခတ္တိယနွယ်ရိုး သာကီဝင်မင်းမျိုးတို့ အမျိုးဇာတ်မပျက် သုဉ်းရေး ကို လုံ့လကြိုးကုတ် အားထုတ်၍ ရတော်မမူပါ။ ထို့ကြောင့် လောကတံထွာဓမ္မတာအရ အမျိုးက တော့ပျောက် ကိုပျောက်ရမည်။ သို့သော် ထိုအမျိုးတို့ ရာဇဝင်တွင်ထင်ရှားရှိခဲ့စဉ်က ဖြစ်ထွန်းခဲ့သည့် ဘာသာ၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ မပျောက်ပျက်ဖို့ကသာ အရေးကြီးပါသည်။
လောက၌ သာကိယဇာတ် ဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ် ပရိနိဗ္ဗန် စံတော်မူ သွားခဲ့ချေပြီ။ သို့သော် ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သော ဒေသနာများထင်ရှား ရှိနေရကား လောကမှာ ဗုဒ္ဓပေါ်ထွန်း နေဆဲပင် ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကမ္ဘာ့လူသား အားလုံး သည် ဗုဒ္ဓ၏ ဓမ္မရိပ် ၌ ခိုလှုံရင်း လောကီ လော ကုတ္တရာအကျိုးတရားများ ကို ခံစားနေကြရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့ မြန်မာနိုင်ငံ ၌ လည်း ငါတို့၏ရှေးဟောင်း ပျူလူမျိုးတို့သည် ရာဇဝင်တွင် အထင်အရှား ရှိခဲ့လင့်စကား ယခုအခါ ပျူဟူ ၍ တလူတယောက်မျှမရှိတော့ချေ။ သို့သော် ပျူစာပေ၊ ပျူယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များ ကား မြန်မာ့ ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ် အဖြစ် ကျန်ရစ်နေပေသေးသည်။ ထို့ကြောင့် ရှေးဟောင်းပျူလူတို့ ပျောက်သုဉ်းခဲ့ရလင့်စကား ပျူယဉ်ကျေးမှုများ ကို ကား တွေ့နေရဆဲပင်ဖြစ်ပါသည်။
အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ပါသည် ဟူသော ဉာတတ္ထစရိယ ကို ဗုဒ္ဓတို့သော် မှ လက်မှိုင်ချရသည် ဖြစ်ရာ ယဉ်ကျေးမှုမပျောက်အောင် သာ ကြိုးပမ်းကြရမှာဖြစ်ပါသည်)
ကျနော် ထိုစာ ကို ဖတ်၍ ဆင်ခြင်တွေးဆစရာ တွေ တိုးလာ၏။ တကယ့်လူမျိုး ကြီး တမျိုးလုံး ပျောက်ကွယ် သွားခဲ့ရသည့် လူမျိုးတွေ အကြောင်း ဖတ်ဖူးမှတ်ဖူး၏။ သူတို့ ချန်ခဲ့သည့် ယဉ်ကျေးမှု လက်စလက်န များကို ထောက်၍သာ ဤသူတွေ ဤနေရာမှာ ဤသို့ကြီးကျယ်ခဲ့ဖူး ပါလားဟု ယုံရ၏။ ယုံချင်စရာပင် မရှိ။ ထိုအတိုင်းပင် ယုံချင်စရာ မကောင်း ဘဲ ယုံလိုက်ရသည့် အဖြစ်တခု ကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ကင်တပ်ကီပြည်နယ် မှ မောင့်ပလဲဆင်န့် ဆိုသည့် အရပ်က Shakers Village ရွာ ရောက်တော့ ထပ်ကြုံပြန် ၏ ။ သူတို့အဖြစ် က လူမျိုးတမျိုး ၏ အမျိုးဇာတ် ပျက်သုဉ်း သွားခြင်းမဟုတ်။ ဖျက်ဆီးခံ ရ၍ ပျက်ရသည့်အဖြစ်မဟုတ် ။ ကိုယ့်သဘော နှင့် ကိုယ် မျိုးဆက်ပြုတ်အောင်နေပြီး ရာချီ သည့် လူတွေ ကမ္ဘာမြေပေါ်မှ တစတစပျောက်ကွယ် သွားကြခြင်းဖြစ်၏။
ရှိတ်ကားစ်များ အကြောင်း ကိုပြောမည် ဆိုလျှင် ဓမ္မသစ်ကျမ်း "တမန်တော်ဝတ္ထု″ အခန်းကြီး၂၊ အခန်းငယ် ၃-၄ မှစရမည်ထင်၏။
ယခုကျနော်ပြောချင်သည်က ကင်တပ်ကီ မောင့်ပလဲဆင်န့်က ရှိတ်ကားစ်များကိစ္စဖြစ်သဖြင့် Ann Lee အန်းလီးအကြောင်းကစပါမည်။
Ann Lee (၁၇၃၆ – ၁၇၈၄)
သူ့ကို ဖေဖေါ်ဝါရီ ၂၉၊ ၁၇၃၆ တွင် အင်္ဂလန်မန်ချက်စတာမြို့၌မွေးပြီး စက်တင်ဘာ ၈၊ ၁၇၈၄ တွင်ကွယ်လွန်၏။။ အဖေကပန်းပဲဆရာ ဂျွန်လီးစ်။ အမေက ဘာသာရေး ကိုင်းရှိူင်းသူ ။ သူ ၆ နှစ်သမီး အရွယ်တွင် ဗတ္တိဇံခံ၏ ။ အပျိုဖော်ဝင်စ က စပြီး ချစ်မှုရေးရာ တွေ သိတ်မဝင်စား။ မိဘတွေ ဇွတ်နားချ ၍ အိမ်ထောင်ကျ ၏။ ကိုယ်ဝန် ၈ကြိမ် ဆောင် ကာ လေးယောက် အသေမွေးပြီး ၄ ယောက်အဖတ်တင်သော် လည်း အားလုံး ၆ နှစ်ထက် ပိုမခံကြ။ လင်ယူသားမွေးမှု သည် လူလူချင်း ကျား/မ ခွဲပြီး ချိုးနှိမ်သည့် ပင်ပမ်းဆင်းရဲ ဟုမြင်၏။ နဂိုအခံ ကလည်း ပုထုဇဉ် တို့ကို ကာမဘုံသားဆုံလည်နွား တွေလို့ ထင်ထား၏။ ဘုရားသ္ခင်အထံတော် တွင် ကျား/မ တန်းတူ၏ ဟုမြင်ပြီး လူတို့ပြုသမျှအပြစ်တွင် လိင်ဆက်ဆံခြင်း သည် အကြီးတကာ့အကြီးဆုံး ဟု ယုံ၏။
သို့ဖြင့် ဝိဉာဉ်၏စင်ကြယ်ရာကို ရှာရင်း ဝေါ့ဒ်လေးစ်ဇနီးမောင်နှံ နှင့် ၁၇၈၅ တွင်ချိတ်မိ၏။ ဤတွင် ရှိတ်ကားစ်အယူအဆ သန္ဓေတည်မိ၏။ ဝေါ့ဒ်လေးတို့က "လိင်မှုရှောင်ခြင်းဖြင့် ပြည့်စုံသော မြင့်မြတ်စင်ကြယ်မှု ကိုရ၏" ထို့ပြင် "ဓါတ်စီးပြီးတကိုယ်လုံးယိမ်းထိုးလာရခြင်း သည် လူတို့အား သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေရန် အလို့ငှာ ဆေးကြောတော်မူသော ဘုရားသ္ခင် ဝိဉာဉ်တော် စွမ်း ကြောင့်" ဟု ဆို၏။ ဝိဉာဉ်တော် ပူးဝင်ပြီး ထိုသို့ Shaking ဖြစ်လာသူ တို့ Shakers များဟု ခေါ်၏။ အမေရိကားတွင် သူတို့ကို တရားဝင်သုံးသည့် အမည်ကွဲတွေ လည်းရှိသေး၏။ သူတို့ကျင့်စဉ် က လိင်မှုရှောင်၊ တန်းတူလုပ်၊ တန်းတူစား၊ ဘုံပိုင်ဆိုင်မှုဖြင့်နေ၊ ဝိဉာဉ်ဓါတ်စီးပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို စင်ကြယ်စေရေး။ ဤတွင် ကျောင်းတော် Church of England နှင့် ရန်စပေါ်ပြီး၊ သူ ထောင်ထဲရောက်သွား၏။ ထောင်ထဲတွင် "လိင်ကိစ္စသည် ဒုစရိုက်မှုအပေါင်း ၏ သရဖူဖြစ်၏။ ထို့ကြောင့် ထိုကိစ္စ ကို ပြင်းစွာ ရှောင်ရမည်။ ခရစ်တော် ဒုတိယ အကြိမ်ပြန်ကြွတော်မူချိန် အတွက် ပြင်ဆင်ဘွယ်ရာ တို့ကို သူ့အနေ ဖြင့်ပြုရမည်။ လောကသစ်ကိုဆောင်ကျဉ်းဖို့ရာ အသင်၏ ဝတ္တရားဖြစ် ၏" စသည်ဖြင့် ဗျာဒိတ်များ ထောင်ထဲတွင်မြင်ခဲ့ရ၏။ သည်လို နှင့် ၁၇၇၄ ရောက်တော့ အန်းလီးနှင့်နောက်ပါ ၈ ဦးသား အမေရိကားသို့ ပေါက်ချလာ၏။ အချိန်က အမေရိကန် တို့ တော်လှန်ရေးစိတ် ထိပ်တက်နေစဉ် ကာလ။ စစ်နဲ့ဝေးဝေး အေးရာအေးကြောင်း နေခြင်း နှင့် ယင်းတို့၏ကျင့်စဉ်ကြောင့် အရိုက်အနှက်၊ အနှိပ်အစက်၊ အဖမ်းအဆီး နှင့် ထောင်အချတွေပါ ခံရ၏။ ၁၇၇၄ တွင် အမေရိကား၌ ထို ၈ ဦးမှစခဲ့သည့် အယူဝါဒသည် ၁၈၂ဝ လောက် ရောက်တော့ နူးအင်္ဂလန်၊ အိုဟိုင်းယိုး နှင့်ကင်တပ်ကီ တို့တွင် သက်ဝင်သူ ၂ သောင်းကျော် ဖြင့် ရွာပေါင်း ၁၉ ရွာ အထိ တည်မိလာ၏။ ၁၈ဝ၅ တွင် ကင်တပ်ကီပြည်နယ် မာဆာခရိုင် မောင့်ပလဲဆင်န့်အရပ် ၌ မြေဧက ၇ဝဝဝ ထောင်ကျယ်၊ ရှိတ်ကားစ် ၅ဝဝ ဖြင့် ရွာတရွာ ၊ ၁၈ဝ၇ ခုတွင် လိုဂန်ခရိုင် ၌ မြေဧက ၆ဝဝဝ ကျယ်၊ ရှိတ်ကားစ် ၃၄၉ ဦးဖြင့်တရွာ ၂ ရွာတည်မိ၏။ ရှိတ်ကားစ်တို့ ၏ နိစ္စဓူဝပြုကျင့်ဖွယ်တွင် ဝိဉာဉ်တော် ၏ လှုပ်အနှိုး ကိုစောင့်ရင်း တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်စွာ တရားမှတ်ခြင်း၊ ဝိဉာဉ်တော်ဝင်ပူးပြီး ဓါတ်စီးမိလျှင် အုပ်စုလိုက် ဝိုင်းပတ်ကခုန်သီဆိုခြင်း၊ ဘာသာစကား အမျိုးဖြင့် ပြောခြင်း၊ ရှေ့ဖြစ်နောက်ဖြစ် ဟောကိန်း ထုတ်ခြင်း၊ ရောဂါဝေဒနာများ ဘုရားကု ကုခြင်း၊ တန်ခိုးပြာဋိဟာပြခြင်း၊ စိတ်၏စင်ကြယ်ရာ၌ဈန်ဝင်စားခြင်း၊ တခါတရံတွင် ဗျာဒိတ်ရူပါရုံတို့ အား အတူတကွ ရှူမြင်ကြခြင်းတို့ လည်းပါ၏။
သူတို့က ကျား/မ၊ လူမျိုး၊ အသားရောင် ခွဲခြားခြင်း ကိုလက်မခံ။ အလုပ်သဘော အရ ယောင်္ကျားအလုပ်၊ မိန်းမသားအလုပ် ဟူ၍ခွဲခြင်း မှအပ အားလုံးတန်းတူခွင့် ကို ကျင့်သုံး၏။ လိင်မှုကိစ္စ ဝေရာမဏိ သိက္ခာပဒံ။ လုပ်ငန်းခွင် မှာ ဖြစ်ဖြစ် ရွာထဲမှာ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမက မိန်းမသတ်သတ် ယောင်္ကျားကယောင်္ကျားသတ်သတ်။ သူတို့အယူကိုယုံ၍ ဝင်လာသည့် လူများအား ဝိုင်းဝန်း ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး မှ လက္ခံ၏။ ရှာတွေ့သမျှနှင့် ပို့လာသမျှ မိဘမဲ့ကလေးများ အား မွေးစားကြ၏။ မြို့နီးချုပ်စပ်တွေကလည်း သူတို့နှင့်အတူနေဖို့ မိဘမဲ့ကလေး တွေလာပို့ကြ၏။ ကလေးတွေ အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့်လျှင်တော့ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်ရွေး ကိုယ့်ဘဝ ကိုတွေးပေတော့။ သူတို့နဲ့ဆက်နေပြီး ရှိတ်ကားစ်လုပ်လိုကလုပ်။ မလုပ်လိုက သွားလို ရာသွား။ သည့်အရင်က မွေးခဲ့ပြီး ရွာပြောင်းလာ၊ မိဘနှင့်အတူနေရင်း ဇာတ်ပြောင်းရှိတ်ကားစ်လေးများလည်းရှိ၏။ သူတို့မှာ ပုဂ္ဂလိပိုင် မရှိ။ လူတယောက် ရှိတ်ကားစ် ဖြစ်လာသည်နှင့် သူ့ပိုင်ဆိုင်မှု အားလုံး ဘုံကျေးရွာသို့အပ်လိုက်၏။ စိုက်ပျိုးရေးနှင့်မွေးမြူရေးအခြေခံ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းကို ဘုံသဘောလုပ်။ မျှဝေသုံးစွဲရာတွင်လည်း ဘုံသဘော။ သူတို့ဘုံစနစ်က လူတန်းစား အခြေခံဘုံစနစ်မဟုတ်။ ဘာသာရေး အကြောင်းပြုဘုံစနစ်။
သူတို့ချင်းချင်းအမျိုးဆိုသော်လည်း သွေးစပ်၍တော်ကြသည့်အမျိုးမဟုတ်။ အမျိုးသားမှန်သမျှ ဘရာသာ (ညီနောင်) များဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးမှန်သမျှ စစ္စတာ(ညီအစ်မ)တွေချည်းဖြစ်၏။ တယောက်ကိုတယောက် ဘရာသာ စစ္စတာဟုသာခေါ်ရ၏။ ရိုးရိုးကုပ်ကုပ် ဘဝ မှန်သော်လည်း တီထွင်ဖန်တီးကြသူများဖြစ်၏။ မီးဖိုချောင်သုံး၊ အိမ်သုံး ကိရိယာများ၊ ကြိုးလွှအဝိုင်း၊ တံမျက်စည်းပြား၊ အဦးဆုံးအဝတ်လျှော်စက်နှင့် ထွန်တုံးထယ်သွား စသည်များလည်းထွင်ခဲ့ကြ၏။ သူတို့လက်ရာသက်သက် အိမ်သုံးလက်မှု ပစ္စည်း တွေ လည်းထုတ်၏။ ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြီး အနေအထိုင်လည်းသန့်ပြန့်၏။ သွေးလွန်တုတ်ကွေး၊ တီဘီ၊ ပလိပ်၊ ကာလဝမ်းလို ကပ်ရောဂါတွေတခါမှ မသင့်ခဲ့။ ပြည်တွင်းစစ်ကြီး ဖြစ်လာတော့ သူတို့အယူအတိုင်း အေးအေးလူလူနေကြ၏။ ဘယ်သူမှစစ်ထဲမလိုက် စစ်မတိုက်။ ဘယ်ဘက်မှလည်း မလိုက်။ တောင်ပိုင်းမြောက်ပိုင်း ဘယ်အပိုင်း က စစ်သည် တွေဖြစ်ဖြစ် ရိက္ခာပြတ် လာလျှင် ရှိတာထုတ်ပေးခဲ့ကြ၏။ စက်မှုတော်လှန်ရေးကြီးအပြီး မြို့တွေမှာစက်ရုံတွေမှိုလိုပေါက်လာတော့ ရွာပစ်ပြီးမြို့ပြေးသူတွေတရုံးရုံးဖြစ်လာ၏။ သံဝါသ နှင့် တဏှာရာဂကိုရှောင်တော့ မျိုးဆက်သစ်တွေလည်း မပြန့်ပွား။ လူသစ်တွေလည်းထပ်မတိုးသည့်ပြင် ရှိပြီးသူတွေကလစ်ကြဆိုတော့ ရှိတ်ကားစ်တို့အဖို့ ရှင်နည်းရာအဂ္ဂလူထွက် ဖြစ်လာတော့၏။ ဤတွင် ရှိတ်ကားစ်တို့ နိဋ္ဌိတံရန်အကြောင်းဖန်တော့၏။
သည်လိုနှင့် ၁၈ဝ၅ ခုနှစ်က စ စည်ပင်ခဲ့သည့် မောင့်ပလဲဆင်န့်က ရှိတ်ကားစ်ရွာလေး ၁၉၁ဝ လည်းကျရော ကျီးနှင့်ဖုတ်ဖုတ်။ ရှိတ်ကားစ်အစ အန်းလီကဟုဆိုလျှင် နောက်ဆုံးရှိတ်ကားစ် မှာ မေရီဆက်တယ်လ် (၁၈၃၆-၁၉၂၃) ဖြစ်မည်။ သူက သူတို့ဘုံလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်ကျား/မတန်းတူခွင့်ရှိမှုအားတန်ဖိုးထားသလို သူမသေခင်မှာ အမျိုးသမီး တွေ မဲပေးခွင့်ရသည် ကိုလည်း မြင်တွေ့သွားခဲ့၏။
သူတို့မရှိတော့သည့်နောက် နေသူမဲ့ပြင်သူမဲ့ အဆောက်အဦးတွေ ယိုယွင်းလိုက်လာ၏။ ပိုက်ဆံရှိသူ တွေကထိုမြေနေရာတွေ ကိုဝယ်ပြီး အဆောက်အဦးတချို့ကို စက်မှု ဇာတ်သွင်း ကာ ကားဝပ်ရှော့ တွေဖြစ်လာ၏။ ၁၉၆၁ ခုရောက်တော့ အစိုးရက "ဤနေသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏ သမိုင်းဝင်နေရာဖြစ်၏" ဟုသတ်မှတ်ကာ ပြုပြင်ထိမ်းသိန်း စောင့်ရှောက်တာတွေစလုပ်၏။ ကျနော်ရောက်တော့ မူလအဆောက်အဦး ၄ဝဝ ကျော်အနက်က ၄ဝ ခန့်သာအကောင်းပကတိ ထိန်းထားသည်ကိုတွေ့ရ၏။ ထိုအထဲတွင် နဂိုရှိသည့် ရွာထဲက စားသောက်ဆိုင်၊ သိုးမွှေးညှပ်ရုံ၊ စိုက်ခင်းစိုက်ကွက်တချို့၊ ဘုံသုံးအဝတ်လျှော်စက်၊ အခြောက်ခံစက်နှင့်မီးပူတိုက်ရာနေရာ၊ မြင်းဆွဲဆီကြိတ်ဆုံ၊ စုပေါင်းဝတ်ပြုရာ ဘုံဘုရားကျောင်းကြီး၊ စုပေါင်းဆွေးနွေးတိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ရာဘုံရိပ်သာ၊ အမျိုးသမီးပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်၊ အမျိုးသားပစ္စည်းအရောင်းဆိုင်၊ အမျိုးသားအိပ်ဆောင်၊ အမျိုးသမီအိပ်ဆောင်များ၊ ကလေးအိပ်ဆောင်များ၊ အိမ်တွင်းမှုပစ္စည်းများထုတ်သည့်အလုပ်ရုံ၊ ရွာ့နောက်ခြမ်း စုပေါင်းအိမ်ယာကြီးများ၊ သုဓမ္မာဇရပ်ကြီးများ၊ စုပေါင်းစားဖိုကြီးများ၊ စုပေါင်းစားသောက်ခန်းကြီးများ၊ ကျွဲ၊ နွား၊ မြင်းတင်းကုပ်များ၊ ကျောက်မီးသွေး သုံးသံရည်ကျိုဖိုများ စသည်ဖြင့်အတော်တော်များတွေ့ရ၏။ ရှိတ်ကားစ်တွေလိုဝတ်ထားသည့် ဧည့်လမ်းညွှန်တွေက လိုက်ရှင်းပြသရုပ်ဆောင်ပြကြ၏။ ပြန်ခါနီးတော့ ရွာထိမ်းသိန်းရေးတာဝန်ရှိသူတဦးက "လာရတာနှစ်သက်ပါသလား"ဟုမေးတော့ ကျနော်က နှစ်သက် ကြောင်း ပြောပြီး စိတ်ဝင်စားဘွယ် ဘဝနေနည်းတခုဟုထင်ကြောင်း" ပြန်ဖြေခဲ့၏။
အပြန်လမ်းမှာ တွေးစရာတွေတပုံကြီးပါလာ၏။ သာကီဝင်များနည်းတူ ရှိတ်ကားစ်တွေလည်း အမျိုးပျောက်ခဲ့ကြ၏။ သို့သော် ရှိတ်ကားစ်တို့က သာကီဝင်တို့လို လူမျိုးတမျိုး အနွယ်တနွယ်မဟုတ်။ လူမျိုးစုံနှင့်စုဖွဲ့ထားသည့် ဘုံလူ့အစုအပေါင်း။ ဦးကျော်လှိုင်၏ အမြင်အရ ဝိဋဋ္နူဘ၏ လက်စားချေစစ်နှင့် ဆွေမျိုးခြင်းပြန်ယူသည့်အလေ့ကြောင့် သာကီဝင် တို့ အမျိုးပျောက်ရခြင်း ဖြစ်၏။ စက်မှုအရင်းရှင်စနစ်နှင့်မြေယာအခြေခံစနစ်တိုက်ပွဲ၊ တသီးပုဂ္ဂလဘဝအနေနှင့်ဘုံသဘောကြား ကီးမကိုက်မှု၊ လိင်ကိစ္စကိုဒုစရိုက်မှုဟုယူကာ မျိုးဆက်ပြန့်ပွားရေး ကိုတားဆီးခြင်း တို့က ရှိတ်ကားစ်တွေကို ပျောက်စေခဲ့၏။ သို့သော် သူတို့ယဉ်ကျေးမှုနှင့် အနုလက်ရာတို့ကျန်ခဲ့၏။ နှောင်းလူတို့ သံဝေဂယူစရာတွေ ချန်ခဲ့၏။
ကျနော်တို့ဆီ တွင်လည်း အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်သူတွေ ရှိ၏။ သို့သော် သူတို့ပျောက်မှာစိုးသည်ကား လူမျိုးမဟုတ်။ စစ်မျိုးဖြစ်၏။ ဘယ်လောက်ကြောက်ကြောက် ထိုအမျိုးပျောက်ရ မည်ကား သေချာ၏။ စစ်မျိုးစစ်နွယ် အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတရပ် ထူထောင်လိုခြင်းကား ယင်းတို့၏ဆန္ဒသာဖြစ်၏။ လောကသဘောအရ ဆန္ဒရှိတိုင်း လုပ်မရ သည့်၊ လုပ်မဖြစ်သည့်၊ ဖြစ်မလာသည့်ကိစ္စတွေ အမြောက်အများရှိ၏။ ပျောက်ရခြင်းတွင်လည်း အကြောင်း၂မျိုး ခံလိမ့်မည်။ အတွင်းကလာသည့် အကြောင်း(သာကီဝင် နှင့်ရှိတ်ကားစ်တို့၏ ဥပမာနှင့်ဆိုသော် ဆွေမျိုးခြင်းပြန်ယူခြင်း နှင့် လိင်ကိစ္စကိုပိတ်ပင်ခြင်း)။ ပြင်ပကလာသည့်အကြောင်း (ထို ဥပမာနှင့်ဆိုသော် စစ်ပွဲနှင့်စနစ်ပြောင်းခြင်း)။
စစ်မျိုးပျောက်မှာ စိုးသူများ တွင်လည်း ပျောက်ရမည့်အတွင်းအပြင်အကြောင်း များစွာရှိ၏။ အတွင်းကအကြောင်းကရှိနေပြီးသား (အာဏာမက်မှုနှင့်စားခွက်လုခြင်း)။ အပြင်အကြောင်းက(လူထုအစိုးရနှင့်လွတ်လပ်ခွင့်လိုအပ်ချက်)။ အပြင်အကြောင်းက အပြင်သူတွေကြောင့်သာဖြစ်ရမည်။ ကျနော်တို့ကား အပြင်လူတွေဖြစ်ကြ၏။ စစ်မျိုးနွယ်အုပ်ချုပ်သူလူတန်းစားကို မနှစ်မြို့သူများဖြစ်ကြ၏။
အမျိုးပျောက်မှာစိုးကြောက်ပါသည်ဟု ကြွေးကြော်ခဲ့သူပင် ယခုစစ်ညွံ့တုံးဘဝရောက်နေရပြီ။ သို့သော် စစ်အာဏာနှင့်စစ်မျိုးကား မကန်းသေး။ မပျောက်သေး။ ကျနော်တို့ အားထုတ်ဖို့ လိုသေးကြောင်း သက်သေပင်ဖြစ်၏။
Posted: 05 Oct 2012 09:21 PM PDT
Source: "ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ သမိုင်းတစွန်းတစ နဲ့ လူမျိုးများ ဝင်ရောက် အခြေချနေထိုင်ပုံ"
ဒီလို မိုက်ရိုင်းတဲ့ အယုတ္တ အနတ္တ စကားလုံးတွေကိုတော့ ကောမန့်ကနေဖယ်ရှားတာကလွဲပြီး ဘာမှတုံ့ပြန်မှာမဟုတ်ပေမဲ့လဲ ပြန်ကြားရေး စာအုပ်ထဲက လေသံဖြင့် ရန်ကုန်မြို့ သမိုင်းကို ဝေဖန်မိသော လူများအတွက်တော့ ဖြေရှင်းချက်ပေးပါရစေ။ တကယ်တော့ ဒါတွေဟာ သိပ်အထူးအဆန်းတော့လဲ မဟုတ်လှပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ပညာရေးစနစ်ကြီးဟာ မျိုးဆက်နှစ်ခုစာမက အမှောင်ချခံထားရတဲ့ ဖတ်စာအုပ်တွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာရလို့ပါပဲ။ ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်တော်ဟာလဲ သမိုင်းပညာရှင်ကြီးမဟုတ်ပဲ ဝါသနာအရ အလွတ်တန်း လေ့လာလိုက်စားတဲ့ ဝါသနာရှင်တဦးသာဖြစ်ကြောင်းကိုကြိုတင်အသိပေးထားပါရစေ။ ဆက်လက်ပြီး "ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ သမိုင်းတစွန်းတစ နဲ့ လူမျိုးများ ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်ပုံကို ကျွန်တော် လက်လှမ်းမှီသလောက်လေး တင်ပြပေးပါရစေ။
တကယ်တော့ ဒီ တရုတ်၊ကုလားစတဲ့ လူမျိုးတွေဟာ အများထင်သလို အင်္ဂလိပ်လက်ထက်လောက်မှာမှ ရုတ်တရက်ကြီး ဝင်ရောက်အခြေချပြီး လူဦးရေဗုံးဘောလလော တိုးပွါးလာတာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုလိုနီခေတ်မရောက်မှီ အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာများမသိမ်းပိုက်မှီ မွန်ဘုရင်များ အာဏာသက်ရောက်စဉ်ကာလတွင်းမှာပင် ဒဂုံ၊သန်လျင်၊ အစရှိတဲ့ အရပ်ဒေသများကိုဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်မှူတွေရှိနေပြီဖြစ်ပြီး မြန်မာဘုရင်များ ရန်ကုန်မြို့ကို အာဏာသက်ရောက်စဉ်မှာတော့ သူတို့ရဲ့အခြေချမှုဟာ အတော်လေးကို ခိုင်မာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ ကျွန်တော်လက်လွတ်စံပယ်ရမ်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ သမိုင်းအမှန်ကိုတင်ပြနေခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပါပြီ။ ဆက်လက်ပြီး အထောက်အထားများနဲ့တင်ပြပေးပါ့မယ်။
၁၃ ရာစုမတိုင်မှီကပင် အိန္ဒိယ၊အာရပ် ရေကြောင်းသွား ကုန်သည်တို့သည်မလက္ကာရေလက်ကြားနှင့် အင်ဒိုနီးရှား ဂျာဗားကျွန်းသို့ အသွား သန်လျင်မြို့တွင် ခရီးတထောက် နားကာ ရေချိုနှင့်စားနပ်ရိက္ခာဖြည့်တင်းခြင်း၊ သင်္ဘောကြံ့ခိုင်မှူများ ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း၊တည်ဆောက်ခြင်းများရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။
မွန်ဘုရင် ရာဇာဓိရာဇ်(ခေါ်)ဗညားနွဲ့(၁၃၈၃-၁၄၂၁) ဟာ အိမ်နိမ့်စံ မင်းသားဘဝနှင့် ဒဂုံ(ရန်ကုန်)အရပ်ကို အခြေစိုက်ပြီး ဟံသာဝတီထီးနန်းကို ပုန်ကန်ခြားနားစဉ်က ရာဇာဓိရာဇ်ဟာ အိန္ဒိယပင်လယ်မှရောက်ရှိလာကြတဲ့ မွတ်စလင် အာရပ် သင်္ဘောသားတွေရဲ့အကူအညီကို ရယူခဲ့တာ ယုံမှားသံသယဖြစ်ဖွယ် မရှိကြောင်းကို B. R. Pearn ရေးသားတဲ့ A History of Rangoon စာအုပ်မှာ ဒီလိုရေးသားထားပါတယ်။
During his occupation of Dagon, Razadarit had been aided by certain Muslim seamen, doubtless some of the Arabs who traded across the Indian Ocean so freely in these days; and this would suggest that the River was now being frequented by foreign sailors who took their merchandise through the Delta creeks to Pegu.
အလောင်းမင်းတရားကြီး လက်ထက် ၁၇၅၅ အရောက်မှာတော့ လူမျိုးခြားများရဲ့ ရန်ကုန်မြို့မှာ အခြေချနေထိုင်မှူကို နဂါးဗိုလ်ထိပ်တင်ဒွေးပြုစုသော ရန်ကုန်မြို့ သမိုင်းစာအုပ်ရဲ့ စာမျက်နှာ ၂၄ မှာဒီလိုရေးသားထားပါတယ်။
(အရှေ့နှင့်အနောက်ဖောက်လုပ်ထားသော လမ်းမှာယခုကမ်းနားလမ်း မြောက်ဘက်အနီးတွင်ရှိ၍ကုလားတန်းဟုခေါ်သည်။ကုလားတန်းဟုခေါ်ခြင်းမှာ အိန္ဒိယတိုင်းသားများနှင့် ဥရောပတိုက်သားများ ထိုစဉ်အခါက ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်သည်ကို အစွဲပြု၍ကုလားတန်းဟုခေါ်သည်။အင်္ဂလိပ်ကိုကုလားဖြုဟုခေါ်၍ အိန္ဒိယတိုင်းသားများကို ကုလားမဲဟုခေါ်သည်။မြို့တွင်း၌ မြို့ဝန်မင်းအိမ်တော်နှင့် ရုံးတော် စစ်ကဲ၊စစ်ကြပ်၊ဗိုလ်မှူးစသော အရာရှိအိမ်များ၊ မဟာမေဒင် ဘလီ ၊ဘုရင်ဂျီ ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊အာမေနိယံ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းနှင့် အကောက်ရုံးတော်နှင့် ဆင်းရဲသားအိမ်များရှိသည်။နိုင်ငံခြားသားများသည် ရောင်းဝယ်ဘောက်ကား၍နေထိုင်ကြသည်။သင်္ဘောဆိပ်များနားတွင် ကုန်တင်ကုန်ချရန်ပစ္စည်းများကို သိုလှောင်ရန်ဂိုဒေါင်များရှိသည်။၎င်းသင်္ဘေင်္ာဆိပ်သုံးခုအနက် တခုမှာ ယခုလတ္တာလမ်းတွင် တရုတ်လူမျိုးတို့၏ သင်္ဘောများ ဆိုက်ကပ်ရန်မြန်မာမင်း၏ ခွင့်ပြုချက်အရ သင်္ဘောဆိပ် တခုရှိသည်။တရုတ်လူမျိုးများလည်းတစတစဝင်ရောက်စီးပွါးရှာပြီးလျှင် ဆိပ်ကမ်းအနီးတွင် ရပ်ကွက် သီးခြားနေထိုင်ကြသည်။ ကျန်သင်္ဘောဆိပ်တခုမှာ အခြားနိုင်ငံများမှလာသော သင်္ဘေင်္ာများဆိုက်ကပ်ရန်ဖြစ်သည်။ဥရောပတိုက်သားများသည် ရန်ကုန်မြို့၌လာရောက်နေထိုင်ကြသည်။၎င်းတို့အနက် အချို့ကား ကုန်သည်များဖြစ်ကြ၏။ တချို့ကား မြန်မာဘုရင်များထံ၌ ကျေးတော်မျိုး၊ကျွန်တော်မျိုး အဖြစ် ဝင်ရောက်အမှုထမ်းကြ၏။မစ္စတာ ဂျောင်းဆေးဆိုသူနှင့် ဘာဘာရှိန်(Mr Jhaunsay and Baba Sheen)တို့သည် အကောက်ခွန်အရာရှိနှင့် အခွန်ဝန်အဖြစ် ဆောင်ရွက်ကြသည်။) ဟူ၍ အထင်အရှားပါရှိပါသည်။
တဖန် B. R. Pearn ရေးသားတဲ့ A History of Rangoon စာအုပ်ထဲမှာလဲ ဒီလိုဖော်ပြထားပါသေးပါတယ်။
inside the stockade, which, as suburbs grew up, came to be known as "the Fort" (the strict meaning of the Burmese myo), the town consisted primarily of three streets running east to west, and two running south to north; l there were other minor streets also, including one immediately behind and parallel to the southern side of the sodckade. The southernmost of the major east-west streets, running slightly north of the present Strand Road, came to be known as the Kaladan, "the street of the foreigners", because most of the foreign merchants lived there.
အင်္ဂလိပ်လူမျိုးကော၊မြန်မာလူမျိုးက ပါပြုစုထားတဲ့ရာဇဝင်ကျမ်းအချက်မှန်၊မမှန်ကို ကျွန်တော်တင်ပြထားတဲ့ပုံမှာပါရှိတဲ့ ဗလီများ။ ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၊အာမေးနီးယမ်း သချိုင်းနေရာများနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးနိုင်ပါတယ်။
ဒီအထောက်အထားတွေကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် သာသနာကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ပိုင်ခွင့်ရှိသလိုဒေသခံများကနေ တခြားဘာသာများကို ကူးပြောင်းကိုးကွယ်တာမျိုးရှိနိုင်သလို လူမျိုးခြားကနေ ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုမိမိနှလုံးသားမှ ကြည်ဖြူစွာကူးပြောင်းသွားသူများလဲ ရှိပါတယ်။ သက်သေအဖြစ်ပြရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် B. R. Pearn ရဲ့ A History of Rangoon စာအုပ်မှာပဲ ဒီလိုဖော်ပြထားပါတယ်။
The easternmost road, which was an extension of the town road corresponding with modern Lewis Street, passed out through the Wungyi's gate and was known as the Wungyi's Road; the name was derived from the circumstance that the town road of which the Wungyi's Road was the extension ran past the Myowun's residence. This road ran from the gate inadirection slightly west of north and at about the point where the Sots Kirk now stands came on to the line of the modern Signal Pagoda Road and so to the Pagoda. These roads were both paved with bricks byaMuslim merchant who turned Buddhist.
ဒါကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့် ဝန်ကြီးလမ်း(ယခု အလံပြဘုရားလမ်း အနီးဟုခန့်မှန်းရ)လို့ခေါ်တဲ့ လမ်းကို အလံပြဘုရားလမ်းနှင့် ရွှေတိဂုံဘုရားထိရောက်အောင် ဖောက်လုပ်လှုဒါန်းခဲ့သူမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင် ယုံကြည်လာသူ မွတ်စလင် ကုန်သည်တယောက် ( Muslim merchant who turned Buddhist.) ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အထင်အရှားမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။
ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ လူမျိုးခြားတွေဟာ အင်္ဂလိပ်ခေတ်လောက်မှ တပြုံတခေါင်းကြီးဝင်ရောက်လာတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုအားလုံး သဘောပေါက်ကျေနပ်နိုင်ကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်ရောက်မှ လူဦးရေတိုးတက်လာတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီအကြောင်းကို လက်လှမ်းမှီသလောက်လေး ကျွန်တော်တင်ပြပေးပါရစေ။ အင်္ဂလိပ်တွေဟာ အောက်မြန်မာနိုင်ငံကို သိမ်းပိုက်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ မြို့များတည်ဆောက်ရန်နှင့် မီးရထားလမ်းဖောက်လုပ်ရန် အတွက် လိုအပ်တဲ့လုပ်သားအများအပြင် စီးပွါးရေးလုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့ အရင်းရှင်ကုန်သည်တချို့ကိုပါ အိန္ဒိယနိုင်ငံမှတဆင့်ခေါ်သွင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဘာသာရေးနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်၊ဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနိုင်သလဲဆိုတော့ ဝင်ရောက်လာတဲ့ အလုပ်သမားအများစုမှာ ယေဘုယျအားဖြင့် အိန္ဒိယလူမျိုး ဟိန္ဒုဘာသာဝင်တွေဟာ မြို့ပြတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းခွင်တွေနဲ့အခြေခံလုပ်ငန်းခွင်များ။ အိန္ဒိယလူမျိုး ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တွေ အတော်များများဟာ မီးရထားလမ်းဖောက်ရေး လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း(ရန်ကုန် ပဲခူးမီးရထားလမ်းမတလျှောက် ထို အိန္ဒိယ -ခရစ်ယာန် ဘာသာဝင် ကျေးရွာကြီး တွေကို အခုထိတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်)အိန္ဒိယလူမျိုး အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေဟာ အရောင်းအဝယ်နှင့် ကုန်သည်လုပ်ငန်း၊အိန္ဒိယတောင်ပိုင်းသားဖြစ်တဲ့ ချစ်တီးလူမျိုးတွေဟာ ငွေတိုးချေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို အားသန်လုပ်ကိုင်ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီတင်ပြချက်ဟာ ကျွန်တော်သိထားသလောက် အကြမ်းဖျင်းတင်ပြချက်သာဖြစ်ပြီး လူမျိုးတမျိုးကို အလုပ်အကိုင်တခုနဲ့ ဘယ်လိုမှတရားသေ တွဲစပ်လို့မရနိုင်ပါဘူးခင်မျာ။မည်သည့်လူမျိုးက မည်သည့်လုပ်ငန်းကိုလုပ်ကိုင်သည်ဖြစ်ပါစေ သမ္မာအာဇီဝါကျပြီး ရိုးသားဖို့ပဲလိုအပ်ပါတယ်။သူ့ဟာသူ ချီးပုံးပဲထမ်းထမ်း၊အမှိုက်ပဲ ကျုံးကျုံး ရိုးသားစွာရတဲ့ ငွေဖြစ်တဲ့ အလွန်ဖြုစင်ပါတယ်။
ဒီအလုပ်တွေကိုအောက်တန်းစားအလုပ်အဖြစ် နှိမ့်ချရှုမြင်တဲ့လူဟာ သူရဲ့ပင်ကိုယ်အတွင်းစိတ်မကောင်းမှူနဲ့ စာဖတ်အားနည်းသူများလို့ပဲကျွန်တော်ရှူမြင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး တချိန်က ဒီလိုဘယ်သူမှမလုပ်ချင်ခဲ့တဲ့ အလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အနူမြုဗုံးတောင် ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီး ကျွန်တော်တော့ ရွှေမြန်မာတွေကတော့ လူများနိုင်ငံတွေမှာ ဒီလိုအလုပ်တွေလုပ်ဖို့ တစတစနဲ့ မွေးရပ်မြေကို စွန့်ခွါနေရတာကို လူတိုင်းသိနိုင်ပါတယ်။ ကံကြမ္မာ လှည်းဘီးဆိုတာမျိုးဟာ တပတ်လည်တတ်ပါတယ်။ဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေ။
ဒီနေရာမှာ ကြုံလို့ပြောချင်တာကတော့ အများသိထားတဲ့နာမည်ကျော် ချစ်တီးလူမျိုးတွေဟာ မွတ်စလင်တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လူများရှိသလို အမဲသား၊ဝက်သား မစားပဲ ဟိန္ဒု၊ဗုဒ္ဒဘာသာများဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ပြောတာကို မယုံဘူးဆိုရင်တော့ ရန်ကုန်မြို့က ချစ်တီးထမင်းဆိုင်တဆိုင်ထဲကို ဝင်ထိုင်ပြီး ဟေ့၊ အမဲသားဟင်းနဲ့တပွဲပေးစမ်းကွာလို့သာမှာကြည့်လိုက်ကြပါခင်မျာ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်တို့ ဖတ်စာအုပ်ထဲမှာ သင်ခဲ့ရတဲ့ တောင်သူလယ်သမားတွေကိုနှိပ်စက်ခဲ့တဲ့ ချစ်တီးတွေရဲ့ အတိုးနှုန်းဟာလေးကျပ်တိုးပါ။ ယခုအချိန်ကိုယ့်မြန်မာအချင်းချင်း အပေါင်မပါပဲချေးငှါးကြည့်လိုက်ပါ။ အနည်းဆုံး ၂၀ တိုးနဲ့ပဲရပါလိမ့်မယ်။ အပေါင်ပစ္စည်းပါရင်တော့ ဘယ်ဈေးလဲဆိုတာလူတိုင်းသိမှာပါ။ အင်္ဂလိပ်ခေတ်နဲ့ လက်ရှိခေတ်ငွေဖောင်းပွမှူကတော့ ကွာတာပေါ့လေ။
တကယ်တော့ ဒီလိုပုံထဲမှာပါလာကြပြီး ဆဲဆိုခံနေရတဲ့လူတွေဟာ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မီး မြန်မာနိုင်ငံကို ကူးစက်လာချိန် ၁၉၄၂ ခုနှစ်မှာ အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကို မှီရာ သင်္ဘော၊ကား၊ရထားသုံးပြီး အမြန်ပြန်ပြေးရပါတော့တယ်။ဘာယာဉ်မှ အသုံးပြုဖို့ မမှီလိုက်သူတွေကတော့ ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းခရီး ကို ကခြေလျင် ပြန်ပြေးရပါတော့တယ်။ အဲလိုပြန်ပြီး စစ်ဘေးဒါဏ်ရှောင်တဲ့လူတွေရဲ့တဝက်လောက်ကတော့ စစ်ဘေးဒါဏ်၊ရာသီဥတု၊ငတ်မွတ်ခေါင်းပါးမှူနဲ့ ရောဂါဘယများအစရှိတဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကို မရောက်မှီလမ်းမှာပဲ ဇီဝန်ကြွှေသွားကြပါတော့တယ်။
ကိုလိုနီခေတ်ရန်ကုန်မြို့နေလူထုဟာ မြန်မာလူမျိုးများထက် ဥရာပတိုက်သားများ၊ လူမျိုးခြားများက ပိုမိုများပြားပါတယ်။ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်ပိုင်း ရောင်စုံသူပုန်သာင်းကျန်းသူတွေရဲ့ ရန်ကြောင့် နယ်ဝေးနေ မြန်မာလူမျိုးများရန်ကုန်မြို့ကိုတိုးတက် အခြေချလာခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။
အချုပ်အားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အတီးတင်ပေးထားတဲ့ဓာတ်ပုံဟာ တချိန်ကကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ သမိုင်းဟာ ဒီလိုတောက်ပြောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတယ်၊ အများပြည်သူ ဗဟုသုတရစေနိုင်ဖို့သာရည်ရွယ်ပါတယ်ခင်မျာ။သူ့ဟာသူ တကယ်တည်ရှိခဲ့လို့ ဓာတ်ပုံထဲမှာပါလာတဲ့ ကိုယ့်အဘိုး၊အဘွားအရွယ်တွေကို တလွဲမာန နဲ့ အသားလွတ်ထိုင်ဆဲဖို့မဟုတ်ပါဘူးခင်မျာ။ ဒါမှ မဟုတ်ပဲ ဒါငါ့နိုင်ငံကွ မနေချင်ထွက်သွားဆိုတဲ့လူများအတွက်လဲ တခုပြောချင်ပါတယ်။ သူတို့တွေကို ဘယ်သူမှ မောင်းထုတ်ဖို့မလိုပါဘူးခင်မျာ။ တစတစ ယိုယွင်းလာပြီဖြစ်တဲ့ မွေးရပ်မြေကို လူမျိုးခြားတွေရော၊ မြန်မာလူမျိုးတွေ ကိုယ်တိုင်ပါ ရေကြည်ရာမျက်နုရာ ထွက်ခွါနေကြတာ လူတိုင်းအမြင်ပါပဲ။ဒါမှ မဟုတ်ရင်လဲ အတီးတင်ပေးထားတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဒေါင်းလုပ်ချ။ ပြီးရင် ဖိုတိုရှော့ထဲထည့်။ မမြင်ချင်တဲ့ ကုလားများ၊တရုတ်များ ကို ဖယ်ရှားပစ်ပြီးတော့ "တချိန်တုန်းက အရှေ့တောင်အာရှမှာ အလှဆုံးဖြစ်ခဲ့ဖူးသော မြန်မာလူမျိုးသီးသန့် နေထိုင်သည့် မဟာရန်ကုန်ရွှေမြို့တော်" တို့ "လူမျိုးခြား ကင်းစင် မြန်ပြည်တခွင်" တို့ဘာတို့လို ခေါင်းစဉ်များတပ်ပြီး ပျော်ပျော်ပါးပါးကြီးသာ ရှဲကြပေလေတော့။
ကျွန်တော်ဟာ သမိုင်းပညာရှင်မဟုတ်ပဲ အလွတ်တန်း လေ့လာတဲ့ ဝါသနာရှင်တယောက်သာဖြစ်တဲ့ အတွက် ကျွန်တော့တင်ပြချက်မှာ အမှားအယွင်းများ ပါရှိခဲ့သည်ရှိသော် ထောက်ပြဝေဖန်ပေးပါရန်စာရှူသူမိတ်ဆွေများအား လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါသည်။ ဒီပို့စ်ဟာ ကုလားသမိုင်း၊တရုတ်သမိုင်း မဟုတ်သလို ရိုဟင်ဂျာသမိုင်းလဲမဟုတ်ပါ။ရန်ကုန်မြို့သမိုင်းစစ်စစ်သာဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ အပြုသဘော ဆောင်သော ဆွေးနွေးချက်များ၊ဝေဖန်ချက်များကို တလေးတစားနှင့်ပြန်လည်ဖြေကြားမှာဖြစ်သောလည်း ပို့စ့်နှင့်မဆိုင်သော ကိစ္စများနှင့် ရိုင်းစိုင်းသော ကောမန့်များကိုတော့ ဖယ်ရှားရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဝမ်းနည်းစွာဖြင့် ကြိုတင်အသိပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
B. R. Pearn, Corporation of Rangoon, American Baptist Mission Press, Rangoon, 1939 ရေးသားသော A History of Rangoon
မူရင်းဆောင်းပါးရှင် – ဝါးလုံးရှည်အတီး ၏ FB စာမျက်နှာမှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။